Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): Bill Gate (သူဌေးကြီး ဘီလ်ဂိတ်)
ဘီလျံနာ သူဌေးကြီး ဘီလ် ဂိတ်၏ ဇာတာ။
ဤဆောင်းပါးသည် စာရေးသူ နျူမာန် ရေးသား ထုတ်ဝေသော- “ကမ္ဘာကျော် ဘီလျံနာ သူဌေး ကြီးများနှင့် ထီဆုကြီး ပေါက်သူများ ၏ဘ၀ ဖြစ်စဉ်နှင့် နက္ခတ္တ အမြင်” စာအုပ်တွင် ပါဝင် သည့် အခန်း တစ်ခန်း ဖြစ်ပါသည်။ သူဌေးကြီး ဘီလ်ဂိတ် နှင့်တကွ- အခြားသော သူဌေး ကြီးများ၏ ဘ၀ ဇတ်လမ်းနှင့် ၄င်းတို.အား- နက္ခတ္တ နည်းစနစ်ဖြင့် ဆန်းစစ် သုံးသပ် ထားချက် များကို သိလိုပါက- လမ်းသစ် စာပေမှ ထုတ်ဝေသော- မူရင်း စာအုပ်တွင် လေ့လာ နိုင် ပါသည်။
ထူးခြားသော လူတစ်ယောက်၊ တနည်းအားဖြင့် - အလွန်.အလွန် ချမ်းသာသူ၊ အလွန်. အလွန် ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားသူတို.တွင် - ထူးခြားသော နက္ခတ် ဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးမှု များ တည်ရှိ နေတတ် သည်ကို စာရေးသူ အနေဖြင့် သဘောပေါက် ထား ပါသည်။ ယခု အခါ-ထိုအယူအဆ မှန်-မမှန် ဆန်းစစ် ကြည့် ပါမည်။ သမားရိုးကျ သုံးသပ်မှု များနှင့် ဇာတာ တစ်စောင်အား ကြည့်ပြီးလျှင်- ချမ်းသာမည် ဆိုပါက- မည်မျှ လောက် သော အဆင့် အထိ ချမ်းသာ နိုင် မည်ဆိုသည်ကို တွက်ချက်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ သို.သော်-MOTAA စနစ် သည် ဇာတာရှင်၏ ချမ်းသာ အောင်မြင်မှု အဆင့်အတန်းကို ဂရပ်တို.ဖြင့် တိကျစွာ ဖော်ပြနိုင် စွမ်း ရှိနေသည် ကိုတွေ.ရ ပါတော့ သည်။
ဦးစွာပထမ- MOTAA စနစ် ကို သုံး၍ -ဒေါ်လာ ဘီလျံများစွာ- ချမ်းသာသော- မိုက္ကရိုဆော့ဖ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သော- ဘီလ်ဂိတ်၏ အကြောင်းကို လေ့လာမိ သော အခါ ထူးခြား မှုများကို ထင်ရှားစွာ တွေ.ရပါတော့သည်။ စာရေးသူ အနေဖြင့် နက္ခတ် ပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ- သုံးသပ်ချက် များကို ဖေါ်ပြရာ၌- မိမိ လိုရာကို- လိုသလို ကောက်ချက် ဆွဲ၍ ရေးသလို မဖြစ် စေရရန်အတွက်- သုံးသပ် နေကျ နည်းစနစ် ဖြင့်ပင် တစ်ပြေးညီ မချွင်းမချန်- လေ့လာ ဆန်းစစ် ကြည့် ပါသည်။ ထို.ကြောင့်- နက္ခတ္တ ပညာ ဖြင့် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ပြုနေကြသူများ၊ ၀ါသနာ ရှင်များကို ဤဆောင်းပါး အနေဖြင့် အလွန် ထူးခြားစွာ အထောက် အကူပြုမည်ဟု ယုံကြည် မိပါသည်။
ထိုသို. သုံးသပ်လေ့လာ ရာတွင်- စာဖတ်သူ ပညာရှင် တို. ရှုထောင့်စုံ မှ မြင်နိုင် စေရန် အတွက်- စာရေးသူ ၏ သုံးစွဲနေကြ မိုးတားနည်း စနစ်ဖြင့် သာမက- ရှေးဟောင်း ကျမ်းလာ- ယောဂ နည်းစနစ်များဖြင့် သုံးသပ်တင်ပြထားပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ- အလွန် တန်ဘိုး ရှိသော ရှေးပညာ ရပ်သည်- ကျမ်းဂန် မှ ဆိုထား သည် ဆိုပြီး-အပေါ်ယံ ရှပ်၍ သုံးသပ်မိပါက- မမှန်ကန် သော ကောက်ချက် များ ဖြစ်ပေါ် လာတတ်သဖြင့် ပညာရှင်များ အနေဖြင့် သတိပြု နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ အလွန် ထင်ရှားစွာ မှန်ကန်နေသော အချက်တို.ကို ကျမ်းဂန် တို.တွင် တွေ.ရ သကဲ့သို. - လုံးဝ မကိုက်ညီ သော အခြေအနေ တို.ကိုလည်း ကျမ်းဂန် တို.တွင် တွေ.နိုင် သည်ကို ထင်ရှား စေလို၍ ဖြစ်ပါသည်။ ကျမ်းဂန်တို.၏ မှားသည်ဟု မဆိုလိုသည် ကို သတိပြု စေချင် ပါသည်။ ကျမ်းဂန်တို.အနေဖြင့်-ဇာတာ တစ်စောင် အနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်း အကျိုးတို.နှင့် ပါတ်သက် သည့် အခြေခံမူတို. နောင်လာ နောက်သား တို. အလွယ် လေ့လာနိုင်ရန်၊ လက်ဆင့်ကမ်း သင်ကြား ပေးခဲ့ ခြင်း ဖြစ် သော်လည်း - ထို အချက်တို.ကို တစ်ခု ချင်း၊ တပိုဒ်ချင်း အနေဖြင့် အဓိပ္ပါယ် မဖေါ်သင့်ပဲ- Comprehensive Approach ခေါ် နောက်ကွယ် သဘောတရားများကို နားလည် နိုင်စွမ်း နှင့်၊ Integrated Studies ခေါ် မိမိ အနေဖြင့် နားလည် တတ်ကျွမ်း ထားသော အချက် တို.ကို ပေါင်းစု အသုံးချတတ်ရန် လိုအပ်သဖြင့်- ပညာရှင်များ အနေဖြင့် သတိထားရန် လိုအပ်သည်။ မိမိ၏ အယူအဆ ကောက်ချက် ဆွဲမှု- တိမ်းချော် မှုကြောင့်- ရှေးပညာရှင်တို.၏ လွန်စွာမှ မြင့်မားသော သဘော တရား အမွေ အနှစ် တို.ကို နောင်လာ နောက်သား လူငယ်များ အထင် မသေး သွားစေရန် မှာ- နက္ခတ္တ ဝေဒပညာကို လေ့လာ လိုက်စား၊ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ပြုနေသူများ အားလုံးတွင် တာဝန် ရှိပါသည်။ ယခု ဤဆောင်းပါးတွင် ရေးသား ထားသည် မှာ ကျမ်းဂန် မှ အချက်တို.ကို တကယ့် ဖြစ်ရပ် နှင့် ယှဉ်တွဲ၍ Case Study အနေဖြင့် သုံးသပ် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဘီလ်ဂိတ်၏ ဥာဏ်ရည် အနေအထား။
လူအများစု မသိထားကြသည့် ဘီလ်ဂိတ် နှင့် ပါတ်သက်သော အချက် တစ်ခုမှာ- တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် ၀င်ခွင့် စာမေးပွဲ တစ်ခု ဖြစ်သော နိုင်ငံတကာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ S.A.T (Scholastic Aptitude Test and Scholastic Assessment Test) တွင် အများဆုံး ဖြစ်နိုင်သည့် အမှတ်ပေါင်း ၁၆၀၀ တွင်၊ ၁၅၉၀ အထိ ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်တိုင်း စစ်သော ထိုစာမေးပွဲ တွင် လူပေါင်း သန်းကျော် ဖြေဆိုကြသည့် အနက် ၁၅၈၀ အထိ ရရှိနိုင် သော ကျောင်းသား ဦးရေမှာ ၇-ဦး ထက်မပိုပါ။
ဘီလ် ဂိတ်၏ ပျမ်းမျှ အားဖြင့် တစက္ကန်.တိုင်း တွင် ၀င်နေသော ငွေမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၅၀ ရှိနေသဖြင့်၊ သူ. အနေဖြင့်- တနေ.တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀-၀င်နေပြီး၊ တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၇၈၀၀ ငွေနေပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ- အကယ်၍ သူ.အနေဖြင့် ဒေါ်လာငွေ တစ်ထောင်တန် တစ်ရွက် လွတ်ကျ သွားသည် ဆိုပါစို.၊ သူ.အနေဖြင့် ပြန်ကောက် စရာပင် မလိုပါ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်- ထို ငွေကို ပြန်ကောက်ရန် ၄-စက္ကန်. ကြာမြင့် ဆိုလျှင်- ထိုအချိန် အခိုက် အတန်.တွင် ပင် သူ.အနေဖြင့် ထိုငွေနှင့် ညီမျှသော ငွေကို ရပြီး ဖြစ်နေသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘီလ် ဂိတ်၏ အိမ် နှင့် ပါတ်သက်၍ အချို. သော ထူးခြားချက် တို.မှာ-
အကျယ်အ၀န်း အားဖြင့် စုစုပေါင်း စတုရန်းပေ ၆၆၀၀၀ (အတွင်းပိုင်း စတုရန်းပေ ၅၀၀၀၀) ရှိသည်။
၂၀၀၅-ခုနှစ် တန်ဘိုးဖြတ်ချက် အရ- အိမ်၏ တန်ဘိုးမှာ- အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ရှိသည်။
ထိုအိမ် တစ်ခုတည်း အတွက် ဘီလ် ဂိတ်အနေဖြင့် နှစ်စဉ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်သန်း နီးပါး အိမ်ခွန်ပေးဆောင်ရသည်။
အိမ်တွင် အသုံးပြုသော ဖန်နန်းမျှင် ကေဘယ်လ် ကြိုးမှာ- ၆၄ ကီလိုမီတာ ကျော် ရှိ၍ အိမ်တွင် အမြဲတမ်း အလုပ်သမား ၃၀၀ အထိ- အလုပ်လုပ်နေကြ၍- ထိုအထဲမှ ၁၀၄-ဦးတို.မှာ- လျှပ်စစ် ပညာရှင်များ ဖြစ်ကြသည်။
အိမ်ရှိ တံခါး လက်ကိုင်များသည် အထူးအော်ဒါ မှာ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး- တစ်ခု လျှင် ကုန်ကျစရိတ် ဒေါ်လာ ၂၀၀၀-ရှိသည်။
အိမ်ရှိ ရေကူးကန် တွင် ရေကူးနေယင်း နဲ.ပင် မိမိကြိုက်သော သီချင်းကို ရေအောက် တေးဂီတ စနစ်ဖြင့် နားဆင်နိုင်သည်။
ဇာတာရှင်အား- ခရစ်သက္ကရာဇ် (1955-October-28- ရက်) ၊မြန်မာ သက္ကရာဇ်- ၁၃၁၇-ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ် လဆန်း၊ ၁၂- ရက်၊ သောကြာနေ.တွင်၊ အမေရိကန် နိုင်ငံ၊ ဆီယဲတဲလ် မြို. ၌ မွေးဖွားသည်။ မွေးဖွား ချိန်မှာ-ညပိုင်း- ၉- နာရီ၊ ၁၅- မိနစ် တွင်- ဖြစ်သည်။
စစ်ဆေး ချိန်တွင် - ဇာတာရှင်သည် အသက်အားဖြင့်- ၅၄- နှစ်၊ ၆-လ၊ ၂၄- ရက် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေး သော ရက်စွဲ။ (23/5/2010)
ဘီလ် ဂိတ်၏ ဇာတာအား MOTAA နည်းစံနစ်ဖြင့် လေ့လာခြင်း။
ပထမဦးစွာ- တွေ.ရှိရသော အချက်မှာ- အောင်မြင် ကျော်ကြားမှု အတွက် အလွန် အရေးပါသော တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် သည် ကမ္ဘာကျော် ဘီလျံနာ သူဌေးကြီး ၏ ဇာတာ တွင် နိစ် ရာသီ တွင် တည်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ နိစ် ခေါ် အင်အားနည်းသော အနေအထား အဖြစ်မှ နိစ္စ ဘင်္ဂ ရာဇယောဂ အောင်မြင် ထင်ရှားမှု ကို ဖြစ်စေ သော အဖြစ်သို. ရောက်ရှိ သွားသည့် အကြောင်းကို နောက်ပိုင်း ယောဂ သုံးသပ်ချက် များတွင် လေ့လာပါ။
ဒုတိယ အနေဖြင့် တွေ.ရသည်မှာ- အထက်တွင် ပြထားသော ဂရပ်များ အတိုင်း ဂြိုဟ် နှင့် ဘာဝ တို.၏ အင်အားသည် ကြောက်ခမမ်း လိလိ အင်အား ကောင်း နေခြင်း ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဂရပ်ဖ် ၏ ဘေးဘက်တွင် ရှိနေသော ကိန်းဂဏန်း တန်ဘိုးကို လေ့လာ လိုက်ပါ။ အင်အား တွက်ချက်မှု အသေးစိတ်ကို မူ- မိုးတား အခမဲ့ သင်တန်း တွင် ပို.ချပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
တတိယ အနေဖြင့် တွေ.ရသော အချက်မှာ- လဂ် အံသာသည် ၂၄း၅၈ တွင် ရှိ၍၊ ရာဟုနှင့် ကိတ်တို.သည် ၂၄း၅၃ တွင် တည်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
MOTAA စနစ် အနေဖြင့်- ဤကဲ့သို.သော အနေအထားကို တွေ.ရပါက- ရာဟုနှင့် ကိတ်တို.၏ အနေအထားတို.ကို အသေးစိတ် စစ်ဆေး လေ့ရှိပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်-ဤရာဟုနှင့် ကိတ်သည် ဇာတာရှင်အား ဒုက္ခပေးမည့် ဂြိုဟ်များလား၊ သို.တည်း မဟုတ် ဇာတာရှင် အား ပါးနပ် လိမ္မာမှု ဖြစ်စေပြီး၊ ငွေကြေး၊ ရုပ်ဝတ္ထု ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပေးမည့် ရာဟု ဖြစ်မည်လား ဆိုသည်ကို ပထမ ဦးစွာ လေ့လာရန် လိုပါသည်။ ရာဟု နှင့် ကိတ်တို.၏ ပင်ကိုယ် သဘာဝနှင့် ၄င်းတို.အား သုံးသပ် ပုံတို.ကို မိုးတား အခမဲ့ သင်ခန်းစာ များတွင် ပို.ချပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(မှတ်ချက်- ဘာဝ တို.၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်ကို - ဘာဝ ၏ သခင်၊ ဘာဝ တို.၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် မဟုတ်သော သာမာန် အိမ်ရှင် တို.ကို - ဘာဝ ၏ အိမ်ရှင် ဟူ၍ ရေးသား သုံးနှုန်းသွားပါမည်။)
ရာဟု အား စစ်ဆေးခြင်း၊
ပထမဦးစွာ- ရှေးကျမ်းများ၏ အဆိုကို တင်ပြပါမည်။
ဘရိဂု သျှတ္တရ ကျမ်း ၁၄-၁၆ အရ၊ ရာဟု သို.မဟုတ် ကိတ်သည် ဇာတာ၏ ၆-တန်.တွင် တည်ပါက-ဇာတာရှင် သည် သည်းခံ တတ်ပြီး၊ ပျော်ပျော် နေတတ်၏။ ဖလဒီပက ကျမ်းအဆိုအရ- ရာဟု ဖြစ်လျှင်- ဇာတာရှင်သည် ချမ်းသာပြီး၊ အသက်ရှည် လိမ့်မည်။ လိဂ်ခေါင်း၊ ဂရင်ဂျီနာ စသည် တို.ဖြစ်တတ်သည်။ ရန်သူတို.၏ တိုက်ခိုက်မှု ရှိ၏။ သမဂ္ဂါ စိန္တာမဏိကျမ်း အလိုအရ- ရာဟုတည်ခြင်း ဖြစ်လျှင် ဇာတာရှင်၏ ရန်သူများ သည် ပျက်စီးတတ်၏။ ဇာတာရှင်သည် ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးပြီး ချမ်းသာ၏။
MOTAA စနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးမည် ဆိုပါက- ထိုရာဟု၏ ရပ်တည်ရာ- အိမ်ရှင်၏ စရိုက်၊ န၀င်း အိမ်ရှင်၊ နက္ခတ် အိမ်ရှင်တို.ကို လေ့လာပါသည်။ ထို.အပြင် ၄င်းရာဟု အပေါ် တွင် မည်သည့် ဂြိုဟ်များက လွှမ်းမိုးထား သည်ကို ပါ တစ်ဆက်တည်း လေ့လာပါ၏။
ဤဇာတာ အရ- ရာဟုသည် ဗြိစ္ဆာ ရာသီတွင် တည်ထားခြင်းဖြင့် အင်္ဂါသည် ရာဟု ရောက်တည် ရာ၏ အိမ်ရှင် ဖြစ်၏။ သို.သော်လည်း - အင်္ဂါသည် ၆-တန်. သခင် အနေဖြင့် မဟုတ်ပါပဲ- ၁၁-တန်.ဘာဝ သခင် ဖြစ်၏။ ထို.ကြောင့် မတော် တစ်ဆ သွေးထွက် သံယို ကျရောက်နိုင်သော ဇာတာမျိုး ဟု၍ ဆုံးဖြတ်၍ မရ။ ထိုအစား- ဇာတာရှင်၏ ရာဟုသည် အပြိုင် အဆိုင် ကိစ္စများ (၆-တန်.) တွင်- တစ်ဇွတ်ထိုး ဆန်သော အင်္ဂါ ၏ စရိုက်သက်ရောက် နေ၏။
တစ်ဖန်-ရာဟုသည် စနေ န၀င်းနှင့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးပိုင် နက္ခတ်တွင် တည်နေ၏။ စနေသည်- ၉-တန်.သခင် ဖြစ်ပြီး- ဗုဒ္ဓဟူးသည် ၄-တန်.သခင် ဖြစ်၏။
ထိုအခြေ အနေများက- စုပေါင်း ညွန်ပြနေသည်မှာ- ဇာတာရှင်၏ ရာဟုသည် အပြိုင် အဆိုင် ကိစ္စများတွင် လုံးဝ သည်းမခံပဲ- အောင်မြင် အောင် လုပ်ကိုင်မည့် အနေအထား၊ ရုပ်ဝတ္ထု ပိုင်ဆိုင်မှု တို.အတွက် ပါးနပ် လိမ္မာစွာ လုပ်ကိုင်မှု သဘာဝ ကိုပေးမည့် အနေအထားကို ပြဆိုနေပါတော့သည်။
ကိတ်ဂြိုဟ် အား စစ်ဆေးခြင်း၊
ဘရိဂု သျှတ္တရ ကျမ်း ၃၁-၃၂ အရ၊ ရာဟု သို.မဟုတ် ကိတ်သည် ဇာတာ၏ ၁၂-တန်.တွင် တည်ပါက- ဇာတာရှင် တွင် သားသမီး နည်းပါးပြီး၊ မျက်စိနှင့် ပါတ်သက်၍ ပြဿနာ ရှိတတ်၏။ ဖလဒီပက ကျမ်းအလို အရ- ကိတ် တည်ခြင်း ဖြစ်လျှင် ဇာတာရှင်သည် မကောင်းမှုတို.ကို တိတ်တဆိတ် လျှို.၀ှက် ကျူးလွန် တတ်ပြီး မကောင်းသော ကိစ္စများ အတွက် ငွေများကို သုံးစွဲတတ်သည်။ မျက်လုံးနှင့် ပါတ်သက်သော ဒုက္ခရှိသည်။ သမဂ္ဂါ စိန္တာ မဏိကျမ်း အလိုအရ- တည်နေသော ဂြိုဟ်မှာ ကိတ်ဖြစ်လျှင်- ဇာတာရှင် သည် ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို. ဘုန်းကြီးမည်။ အလှူဒါန ကြီးကျယ်စွာ ပြုမည်။ သူ၏ ရန်သူများ ပျက်စီးမည်။ ဇာတာရှင်တွင် မျက်စိဒုက္ခ ပေးလိမ့်မည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ရှေးကျမ်းတို.၏ အဆိုကို လှေနံ ဓားထစ် ဟောသင့် ပါသည်လား- ပညာရှင် တစ်ဦး အနေဖြင့် မည်သည့် အကြောင်း တို.ကြောင့် ရှေးကျမ်း တို.က ဤသို.ဆိုထားသည် ဆိုသည့် နောက်ခံ သဘောတရားကို သိသင့် ပါသည်။
ယခု တစ်ဖန်- ၄င်းအနေအထားအား MOTAA စနစ်ဖြင့် သုံးသပ်ကြည့်ကြပါစို.- ကိတ်ဂြိုဟ် သည် ၁၂-တန်.ဘာဝ၊ သောကြာပိုင်ရာ ရာသီတွင် တည်နေ၏။ သောကြာ သည် ဤဇာတာ အတွက် ၅-တန်. သခင် ဖြစ်နေ၏။ တစ်ဆက်တည်း တနင်္ဂနွေ န၀င်းနှင့် အင်္ဂါ နက္ခတ်ကို စီးနင်း ထား၏။ တနင်္ဂနွေသည်- ၃-တန်. သခင် ဖြစ်သလို- အင်္ဂါသည် ၁၁-တန်. သခင် ဖြစ်၏။ ကိတ်အား အခြားဂြိုဟ်ဆိုး များက လွှမ်းမိုး ထားခြင်း မရှိ၊ ထို.ကြောင့် ဤဇာတာရှင်၏ ကိတ်သည်လည်း- အန္တရာယ် ဖြစ်စေ သော ကိတ်မျိုး မဟုတ်။ ထိုအစား- ရုပ်ဝတ္တု ပိုင်ဆိုင်မှုတို.ကို စွန်.လွှတ်သော ကိတ်- ချမ်းသာ မှုတို.ကို လှူဒါန်း ပစ်ရန် ဖြစ်စေ သော ကိတ်ဖြစ်နေ၏။
(အထူးမှတ်ချက်- ရာဟုနှင့် ကိတ်တို.ကို ဤဇာတာ အတွက် ဆိုးမည် မဟုတ်ဟု ပြော၍- အမြဲတမ်း ကောင်းမည်ဟု မဆိုလို သည်ကို သတိပြုပါ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ပင်ကိုယ် စရိုက်အားဖြင့် အဆိုးတရား တို.ကို ဖြစ်စေ တတ်သော ရာဟုနှင့် ကိတ်တို.သည်- ကောဇာ ဂြိုဟ်တို.၏ အနေအထားကို မူတည်ကာ- ၄င်းတို. ကောဇာ ရပ်တည်မှု ပေါ်မူတည်၍ ဇာတာရှင်အား ဒုက္ခ ပေးတတ် သည်ကို သတိပြုစေလိုပါသည်။ ထို.ကြောင့် ဂြိုဟ်နှင့် ဘာဝတို.၏ အင်အားကို ပြသော ဂရပ်တွင် ၄င်းတို.၏ လွှမ်းမိုးမှုကို အနီရောင် (ဂြိုဟ်ဆိုး အဖြစ်) ဖြင့်သာ ဖေါ်ပြထားသည်။)
ဇာတာရှင်၏ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် သည် ၃-တန်.ဘာဝ သခင်ဖြစ်၍ ၅-တန်.တွင် ရပ်တည် သည်။ နိစ် ရာသီတွင် ရပ်တည်ခြင်း ဖြစ်နေ၍ ရန်ဂြိုဟ်ပိုင်သော ရာသီတွင် ရပ်တည် ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းပိုင် ၃-တန်.ဘာဝ အား ဂြိုဟ်ဆိုး များ၏ အပူးအမြင် လုံးဝ ကင်းစင်သည်။ ဂြိုဟ်ကောင်းများ ကလည်း ၃-တန်.ကို အပူး အမြင် မရှိကြပါ။ သို.သော် လည်း ၄င်းရပ်တည် ရာ- ၅-တန်.ဘာဝ အား -၅-တန်.သခင် သောကြာမှ ၉၂%၊ ၉-တန်.ဘာဝ သခင် စနေမှ ၇၉% ဖြင့်လွှမ်းမိုး ထောက်ပံ့ ပေးထားသည်။
ဤအခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ပါက- အောင်မြင်မှု၊ အဆင့် အတန်း ကို ကိုယ်စား ပြုသော တနင်္ဂနွေသည် ၃-တန်.ဘာဝ ခေါ် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း တာဝန် ကိုပါ ဆက်လက် ယူထားပြီး- ပညာဥာဏ် ကို ကိုယ်စားပြုသော ၅-တန်.ဘာဝ တွင် ရပ်တည်ခြင်း၊ ၄င်း ၅-တန်. ဘာဝ၏ ဗဟိုချက်မှတ်အား၊ ၄င်း ၅-တန်.ဘာဝ သခင် ဖြစ်သော သောကြာကိုယ်တိုင် မှ အနီးကပ် လွှမ်းမိုး ထားခြင်း၊ အတွေးအခေါ် နှင့် အဆင့်မြင့် ပညာကို ကိုယ်စားပြုသော ၉-တန်.သခင် စနေမှ ထောက်ပံ့ ပေးထားခြင်း၊ တို.ကြောင့် ၅-တန်. ဘာဝ အနေဖြင့် အင်အား ကောင်းသွားပါသည်။ တနင်္ဂနွေ ရပ်တည်ရာ- ၅-တန်.အင်အား ကောင်းသွားခြင်း ကြောင့် တနင်္ဂနွေ အနေဖြင့် အင်အား ကောင်း သွားရသည်။ ထို.ကြောင့် တနင်္ဂနွေသည် နိစ်ရာသီ တွင် တည်နေခြင်း မှ အပ- အင်အား ကောင်းသွားပါသည်။ နိစ် အနေအထားသည် လည်း နိစ္စဘင်္ဂ ရာဇ ယောဂ ယုဂ် ဖြစ်သွား သဖြင့်- ဇာတာရှင် သည် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းဖြင့် အောင်မြင်ကို အပင်ပန်းခံ- တည်ဆောက်ခဲ့ ပြီးနောက် အလွန် အောင်မြင် သွားသည့် အနေအထား ကို မြင်ရပါသည်။
ဇာတာရှင်၏ တနင်္လာ ဂြိုဟ် သည် ၂-တန်.ဘာဝ သခင်ဖြစ်၍ ၁၀-တန်.တွင် ရပ်တည် သည်။ သို.သော်လည်း နိစ် န၀င်းစီးနေသည်။ ထူးခြားသည်က- တနင်္လာဂြိုဟ် ပိုင်ဆိုင်ရာ ၂-တန်.ဘာဝကိုရော၊ ၄င်းရပ်တည်ရာ ၁၀-တန်.ဘာဝ ကိုပါ- ၆-တန်.တွင် ရပ်တည်သော ရာဟုမှ ၁၀၀% အတိအကျ ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ အကယ်၍ ရာဟုသည်သာ ဤဇာတာရှင် အတွက် လုံးဝ ဂြိုဟ်ဆိုး တစ်ခု ဖြစ်ပါလျှင်- ဇာတာရှင် အနေဖြင့် နလံထူ စရာမရှိ၊ သို.သော် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ဤဇာတာ အတွက် ရာဟုသည် ရုပ်ဝတ္ထု ပိုင်ဆိုင်မှု အတွက်- အပြိုင်အဆိုင် လုပ်ငန်းတို. အတွက် အောင်မြင်အောင် ဖန်တီးပေးနေ သော အနေအထားတွင် ရှိနေခြင်း ကြောင့် ဇာတာရှင်သည် - ရာဟု၏ ပရိယာယ် တစ်ခု ဖြစ်သော ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် လုပ်ငန်း တို.မှ ၀င်ငွေရရှိခြင်း၊ ထိုလုပ်ငန်း နှင့် ကမ္မဘာဝ ခေါ်သော ဘ၀ လမ်းကြောင်းကို အောင်မြင် စေခြင်း၊ စီးပွားရေးတွင် ပါးနပ်ကျွမ်းကျင် ခြင်းတို.ကို ဖော်ပြ နေသည်။
ထိုမျှ မကသေး ၂-တန်.ဘာဝ၏ ဗဟိုချက်မှတ်ကို ၉-တန်.ဘာဝ သခင် စနေမှ အင်အားကောင်း ဖြင့် အမြင်ပြုထားခြင်း ကိုလည်း ထပ်မံတွေ.ရပြန်ပါသည်။ ၉-တန်. ဘာဝသည် အဆင့်မြင့် ပညာကို ကို အဓိပ္ပါယ် ဖော်ဆောင်သော ဘာဝ ဖြစ်ပြီး- ၂-တန်.ဘာဝသည် ၀င်ငွေကို ဖော်ဆောင် သော ဘာဝ ဖြစ်သည်။ ဤအချက်က အဆင့် မြင့် အတတ်ပညာ ဖြင့် ၀င်ငွေရမည်ကို ဖော်ဆောင်နေပါသည်။
တစ်ဖန် တနင်္လာ ရပ်တည်ရာ- ၁၀-တန်.ဘာဝ၏ ဗဟိုချက်မှတ်အား- စည်းစိမ် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖော်ဆောင်သော ၄-တန်.ဘာဝ သခင် ဗုဒ္ဓဟူးမှ သမသတ် အမြင် အား အတိအကျ နည်းပါးဖြင့် ထပ်မြင်ထားပြန် သေးသည်။
နောက်ထပ် ကြည့်ပါကလည်း- တနင်္လာဂြိုဟ် ကိုယ်တိုင်အား -ချမ်းသာခြင်း ကို ဖြစ်စေသည့် ၁၁-တန်.ဘာဝ ၏ သခင် အင်္ဂါမှ - အင်အား ကောင်းစွာ အမြင်ပြုထား ပြန်ပါသည်။
နိစ်န၀င်း စီးနေသော တနင်္လာဂြိုဟ်သည် အထက်ပါ အနေအထားများ အရ- ချမ်းသာခြင်း ကိုဖြစ်စေသည့် အနေအထားသို. ရောက်လာပြန်ပါတော့သည်။
ဇာတာရှင်၏ အင်္ဂါ ဂြိုဟ် သည် လာဘ် လာဘကို ကိုယ်စားပြုသော လာဘ ဘာဝ (၁၁-တန်.ဘာဝ) သခင်ဖြစ်၍ အိုးအိမ် စည်းစိမ် ပိုင်ဆိုင်မှု ကို ဖေါ်ဆောင်သော ဗန္ဓု ဘာဝ ခေါ် ၄-တန်.ဘာဝ တွင် ရပ်တည်သည်။ လာဘ ဘာဝ ဖြစ်သော ၁၁-တန်. အိမ်ရှင်သည် ဗန္ဓုဘာဝ ဖြစ်သော ၄-တန်.တွင် တည်ခြင်းမှာ- ရင်းနှီး မြုပ်နှံခြင်း ဖြင့် ချမ်းသာ ခြင်း နှင့်၊ ကောင်းမွန်သော၊ အဆင့်အတန်းမြင့်မားသော အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ဖေါ်ပြနေသည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ဖြစ်သော ၁၁-တန်.ဘာဝ ၏ ဗဟို ချက်မှတ်အား၊ ၅-တန်.ဘာဝ သခင် ဖြစ်သော သောကြာ မှ အနီးကပ် လွှမ်းမိုး ထားခြင်း၊ အတွေးအခေါ် နှင့် အဆင့်မြင့် ပညာကို ကိုယ်စားပြုသော ၉-တန်.သခင် စနေမှ ထောက်ပံ့ ပေးထားခြင်း၊ တို.ကြောင့် ၁၁-တန်. ဘာဝ (လာဘ ဘာဝ) အနေဖြင့် အင်အား ကောင်းသွားပါသည်။ ထိုအခါ- အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုပါ တစ်ဆက်တည်း အင်အား ကောင်းသွား စေပါသည်။ တစ်ဖန်- အင်္ဂါရပ်တည်ရာ- ၄-တန်.ဘာဝ၏ ဗဟိုချက် အားလည်း၊ မိမိပိုင် အိမ်တွင် ရပ်တည်နေသော ၄-တန်.သခင် ဗုဒ္ဓဟူး မှ အင်အား ကောင်းစွာ လွှမ်းမိုး ထားပြန် ပါသည်။ အင်္ဂါရပ်တည်ရာ- ၄-တန်.ဘာဝ သည် အင်အား ကောင်းခြင်း ဖြင့် ၁၁-တန်.ဘာဝ ခေါ် ငွေကြေး စုဆောင်း ချမ်းသာ မှုကို ဖေါ်ပြသော အင်္ဂါ အနေဖြင့် အင်အားကောင်း ရရှိသွားပါသည်။
ဇာတာရှင်၏ ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ် သည် အိုးအိမ် စည်းစိမ် ပိုင်ဆိုင်မှု ကို ဖေါ်ဆောင်သော ဗန္ဓု ဘာဝ ခေါ် ၄-တန်.ဘာဝ ၏ သခင် ဖြစ်၍ မိမိပိုင် ရာသီ တွင် ရပ်တည်သည်။ တစ်ဆက်တည်း ပင်ထိုရာသီသည် ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ် အနေဖြင့် ဥုစ်ရာသီ လည်း ဖြစ်နေသည်။ ထို.အပြင် ရပ်တည်ရာတွင် ရိုးရိုး တည်နေခြင်းမဟုတ်ပဲ- ၄င်းပိုင် ဘာဝ-၄-တန်. ဘာဝ ၏ ဗဟိုချက် အမှတ်နှင့် အလွန်နီးစပ် စွာတည် နေသည် ကိုတွေ. နေရသည်။ ထို.သို.မိမိပိုင်ရာသီ တွင် ရပ်တည်ရုံ သက်သက်မျှ မဟုတ်ပဲ- မိမိပိုင် ရာသီ၏ ဘာဝ ကို အားကောင်းစွာဖြင့် လွှမ်းထားခြင်းကြောင့်- ၄-တန်.ဘာဝ ခေါ် အိုးအိမ် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖေါ်ဆောင်သော ဘာဝ အနေဖြင့်သာမက- ဗုဒ္ဓဟူး၏ ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း ဖြစ်သော စကားပြောကောင်းခြင်း၊ စာရေးခြင်း၊ သင်္ချာ အတွက်အချက် ထူးချွန်ခြင်း တို.ကိုပါ တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်စေပါတော့သည်။ ဘီလ်ဂိတ် သည် ကိုယ်တိုင် အနေဖြင့်ရော- ပူးတွဲစာရေးသူ အဖြစ်ဖြင့် ပါ- စာအုပ်ပေါင်း များစွာ ရေးခဲ့သည့် အပြင် အတွက် အချက်နှင့် ပါတ်သက်သော ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် လုပ်ငန်းဖြင့် ကြီးပွား လာရခြင်းမှာ ဤအချက်ကို ထင်ထင်ရှားရှား သက်သေ ပြနေ ပါတော့သည်။
အိုးအိမ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပါတ်သက်၍လည်း-
အိမ်ချည်း သက်သက် အကျယ်အ၀န်း အားဖြင့် ၆၆၀၀၀ စတုန်းပေ အကျယ် ရှိသော အိုးအိမ်ကို ပိုင်ဆိုင် ထားသည် ကိုတွေ.ရ ပါသည်။
ဤနေရာတွင် ထူးခြားမှု တစ်ခုကို ထပ်တွေ.လာရပြန်ပါသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုတို. ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပျက်စီး စေတတ်သော ကိတ်ဂြိုဟ်သည် ဇာတာရှင်၏ ၁၂-တန်.တွင် ရပ်တည် နေရာမှ- ၄-တန်.ဘာဝ ခေါ် အိုးအိမ် စည်းစိမ် ဘာဝ အား အင်အား အတိအကျ ဖြင့် အမြင် ပြုထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဤအခြေအနေကို မည်သို. အဓိပ္ပါယ် ဖေါ်ဆောင်မည်နည်း။
အထက်တွင် လေ့လာခဲ့သည့် အတိုင်း- ဤဇာတာ အတွက် ကိတ်ဂြိုဟ်သည် - ရုပ်ဝတ္တု ပိုင်ဆိုင်မှုတို.ကို စွန်.လွှတ်သော ကိတ်- ချမ်းသာ မှုတို.ကို လှူဒါန်း ပစ်ရန် ဖြစ်စေ သောကိတ် ဖြစ်နေ၏။ အကယ်၍ ထိုကဲ့သို. မလုပ်ပါကလည်း- ကိတ်ဂြိုဟ် သည် ဇာတာရှင်၏ အိမ်တွင်းရေး စိတ်ချမ်းသာမှု ကို ဖျက်ဆီး ပစ်မည်ကို သတိပြုပါ။
ဇာတာရှင်၏ ကြာသပတေး ဂြိုဟ် သည် အများက အိမ်ထောင်ရေး ဘာဝ ဟု အသိ များသော ၇-တန်. (တနည်းအားဖြင့် - MOTAA စနစ် အရ- ပါတနာ ခေါ်- စီးပွားဘက် အိမ်ထောင်ဘက် လက်တွဲ ဖေါ် ကောင်း၊ စပ်တူစပ်ဘက် ကောင်းကို ဖေါ်ညွှန်း နေသော ၇-တန်.) ဘာဝ ၏ သခင် ဖြစ်၍ ၂-တန်.ဘာဝခေါ် ကြီးပွား ချမ်းသာ ရေး၊ ၀င်ငွေနှင့် ဆိုင်သော ဘာဝ တွင် ရပ်တည် သည်။ ဇာမဏိ ရသေ့ မူအရမှာမူ- ၂-တန်.ဘာဝ နှင့် ၇-တန်.ဘာဝကို မာရက ဘာဝ ဟု ယူဆ၍ ၄င်း ဂြိုဟ်များ ဒဿာ စားချိန်တွင် သေဆုံး တတ်သည်ဟု ယူဆကြပါသည်။ ၄င်းအဆိုအား စစ်ပြီးခေတ် ကာလ- ဒဿာ အဟောကို နှစ်သက်သော မြန်မာ ပညာရှင် တို.အနေဖြင့် တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် လက်ခံ သုံးစွဲခဲ့သည်ကို တွေ.ရပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ထိုသို. ယူဆ ရသည် ဆိုသည့် အကြောင်းကို - မိုးတား အခမဲ့ သင်ခန်းစာ များတွင် ပို.ချ ပေးမည် ဖြစ်သည်။
ကြာသပတေး ၏ ပိုင်ဆိုင်ရာ- ၇-တန်.ဘာဝအား - ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး၊ စွန်.စား ရဲသော စိတ်ဓါတ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် ၃-တန်.သခင် ဖြစ်သော စနေ မှ ၃-တန်. အမြင် အား ကောင်းစွာဖြင့် လွှမ်းမိုးထားခြင်း၊ ဖြင့် ကြာသပတေးအား အင်အား ကောင်းစေပါသည်။ ထိုမျှ မက- ကြာသပတေး ရပ်တည်ရာ- ၂-တန်.ဘာဝ ကိုပါ- စနေမှ ၁၀-တန်.အမြင် ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားပြန်ရာ- ဇာတာရှင်သည် ပညာဥာဏ် အားကောင်း သည်နှင့် အမျှ- မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်သော အတတ်ပညာ အတွက်- ကျောင်းပညာ ကို ရဲရဲ တင်းတင်း စွန်.လွှတ်ရဲသော၊ အနေအထား၊ စနေ- အပင်ပန်း ခံနိုင်မှု စွမ်းအား တို.ကို ရထားပါတော့သည်။ ဤအချက်သည် - ဇာတာရှင် နှင့် မိတ်ဆွေ ဖြစ်သူ ပေါလ် အယ်လင် တို.- ၂-ယောက်သား ကျောင်းဆက် မတက် ကြတော့ပဲ- ၄င်းတို. စိတ်ပါသော ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းကို ဇောက်ချ လုပ်ကိုင် စေခြင်း၏ အကြောင်း ရင်း ဖြစ်နေသည်။ တစ်ဖန်- ကြာသပတေး သွားရောက် ရပ်တည်သော ရာသီ၏ သခင်- တနည်းအားဖြင့် နယ်မြေ တာဝန် ခံဂြိုဟ်မှာ- တနင်္လာ ဖြစ်၍ တနင်္လာသည် ရဲတင်းသော အင်္ဂါ၏ (တနည်းအားဖြင့်လည်း - ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ၁၁-တန်.ဘာဝ ၏ သခင်) အင်အားကို ရထားသည်ကို ပြန်ကြည့်ပါ။
ထို.ကြောင့် ဇာတာရှင်၏ ကြာသပတေးသည် အင်အားကောင်းခြင်း ကြောင့် ဥာဏ်ပညာ ကြီးခြင်း၊ မိမိလိုချင်သော ပညာအတွက်- လိုအပ်သည် များကို လုပ်ဆောင်ရန် ရဲတင်းခြင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်း ရရှိခြင်း၊ ချမ်းသာ ခြင်းတို.ကို တစ်ဆက် တည်း ရရှိသွားပါတော့သည်။
ဇာတာရှင်၏ သောကြာ ဂြိုဟ် သည် ပညာရေးဘာဝ- တနည်းအားဖြင့် ပုတ္တရဘာဝ ဟု ခေါ်သော ၅-တန်. ဘာဝ ၏ သခင် ဖြစ်၍ မိမိပိုင် ၅-တန်.ဘာဝ တွင်ပင် ရပ်တည် သည်။ အလွန်ကောင်း သော အနေအထား တစ်ရပ် ဖြစ်နေ ပြန်သည်။
တစ်ဖန် ထိုသောကြာအား- ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး၊ စွန်.စားရဲသော စိတ်ဓါတ်ကို ကိုယ်စား ပြုသည့် ၃-တန်.သခင် ဖြစ်သော စနေ မှ နီးစပ်စွာ ပူးကပ်ထား သည်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ထို.ကြောင့် ဇာတာရှင်သည် အတတ်ပညာ၊ အသိပညာ နှင့်ဆိုင်သော ကိုယ်ပိုင် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်မည်ကို ဖေါ်ပြနေသည်။ တစ်ဆက်တည်း ပင်- သောကြာ ဂြိုဟ်သည် စည်းစိမ်ခံစား ရမှုကို ဖေါ်ပြသော ဂြိုဟ်ဖြစ်နေသည်ကို ပါ သတိပြုပါ။ ထို.ကြောင့် ဇာတာရှင်သည် စည်းစိမ် ချမ်းသာ၊ ဇိမ်ခံ ယာဉ် တို.ဖြင့် နေထိုင် ရသည် ကို မြင်ရ ပါတော့သည်။ ထိုမျှ မက- ပုတ္တရ ဘာဝ ခေါ် သားသမီး တို.နှင့် ဆိုင်သော ဘာဝ ၏ သခင် သောကြာ အနေဖြင့် အင်အားကောင်း ခြင်း၊ ဂြိုဟ်ဆိုး တို.၏ လွှမ်းမိုးမှု မရှိခြင်းကြောင့် - ဇာတာရှင်တွင် သားကောင်း၊ သမီးမြတ်တို. ရရှိမည် ကိုပါ ဖေါ်ပြ နေတော့သည်။
ဇာတာရှင်၏ စနေ ဂြိုဟ် သည် - သုဘဘာဝ ဟု ခေါ်သော ၉-တန်. ဘာဝ ၏ သခင် ဖြစ်၍ ၅-တန်.ဘာဝ တွင်ပင် ရပ်တည် သည်။ အလွန်ကောင်း သော အနေအထား တစ်ရပ် ဖြစ်နေ ပြန်သည်။ ၉-တန်.ဘာဝ သည် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အတွေး အခေါ် အသိဥာဏ် ကို ဖေါ်ပြနေသော ဘာဝ ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်း အိမ်ရှင်သည်- ၅-တန်. ဘာဝ ခေါ် ပညာ ဥာဏ် နှင့် ပါတ်သက်သော ဘာဝတွင် ရပ်တည်နေခြင်း ဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ကျောင်းစာကို ကျောင်းစာ အတိုင်း သဘောထားသူမျိုး မဟုတ်၊ ကျောင်းစာ ကို မိမိကိုယ် ပိုင် အတွေးအခေါ် နှင့် ယှဉ်တွဲ စဉ်းစားနိုင်သော ပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်မည်၊ ဂုဏ်သိက္ခာ အဆင့်အတန်း မြင့်မား မည်ကို ဖော်ပြနေပြန်ပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲ အနေဖြင့် စနေဂြိုဟ်သည် အပင်ပန်း ခံနိုင်စွမ်းကို ပေးသော ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ အသက်ရှည်မှု ကို အင်အားပေးသော ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင် အပင်ပန်း ခံနိုင်ခြင်း မှာ - မိမိကိုယ်ပိုင် အလုပ်ကို မစတင်ခင် ကပင်- ညပေါင်းများစွာ အလုပ် လုပ်ကိုင် ခဲ့ခြင်းသာမက- မိုက္ကရို ဆော့ဖ် ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင် ပြီးနောက် ၁၃-နှစ် လုံးလုံး ခွင့်တစ်ရက်မျှ မယူခဲ့ခြင်းက သက်သေခံနေပါတော့သည်။
ဤဇာတာကို အမှတ်တမဲ့ ရှေးရိုး အစဉ်အလာ- အတိုင်း ကြည့်မိသူ တစ်ဦး အနေဖြင့် ဆိုလျှင်- ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းကို ဖေါ်ဆောင်သော ၃-တန်.ဘာဝ သခင်လည်း ဖြစ်၊ အောင်မြင် ကျော်ကြားမှုကို ဖေါ်ဆောင်သော ဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်သည့် တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်သည် နိစ်ရာသီ တွင် ရပ်တည်နေခြင်း၊ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ၂-တန်.ဘာဝ သခင် ဖြစ်သည့် တနင်္လာဂြိုဟ် အနေဖြင့် နိစ် န၀င်းစီးနင်း နေသည်ကို သာ ကြည့်လိုက်မိပါက- ဤဇာတာရှင်သည် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ဖြင့် အောင်မြင် ချမ်းသာ မည်ဟု ဟောပြောနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။
ဇာတာရှင်သည် မေထုန်လဂ် ဖြစ်သည် မိုးတား အခြေခံတွင် ဖေါ်ပြ ခဲ့သည့် အတိုင်း မေထုန် လဂ် ပိုင်ရှင် တစ်ဦး အနေဖြင့် ရာဟုနှင့် ကိတ်မှ အပ- အခြား ဂြိုဟ်ဆိုးတို. မရှိပါ။
သို.သော်လည်း ဖြစ်ချင်တော့ ရာဟုသည်- ၄င်းအနေဖြင့် သင့်တော်သော နေရာ ဖြစ်သည့် ၆-တန်.ဘာဝတွင် တည်နေသော်လည်း- ၆-တန်.ဘာဝ၏ ဗဟို ချက်မှတ် အား ဖျက်ဆီး နေမိခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချက်သည်- ဇာတာရှင် အား မလို မုန်းထားသူ ပေါများစေခြင်း၊ အပြိုင်အဆိုင် စိတ်ကြီးမားခြင်း၊ တို.ကို ဖြစ်စေ သဖြင့် - ဇာတာရှင် အနေဖြင့် ယာဉ်စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မှု (လိုင်စင် မရှိပဲ ကားမောင်းမှု၊ သတ်မှတ် ထားသော မိုင်နှုန်းထက် ပိုမောင်းမှု) တို.ဖြင့် ၃-ကြိမ်ထက် မနည်း အဖမ်းခံ ခဲ့ရခြင်းကို ဖြစ်စေခဲ့ ပါသည်။ ထိုအပြင်- အငြင်းအခုံ ပြဿနာများဖြင့် တရားရုံး တက်ခဲ့ရ သည်ကို လည်း သတိ ပြုနိုင်ပါသည်။
ထို.ကြောင့် ဤဇာတာရှင် အနေဖြင့် တနင်္ဂနွေ ဒဿာ စားသော ကာလများ- ရာဟု ဒဿာ အတွင်း- ကောဇာရာဟုသည်- ရာဟုပိုင် နက္ခတ်၊ န၀င်း စီးနင်း သော အခါ များတွင် ပြဿနာ များ တက်နိုင်သော ဇာတာ ဖြစ်ပါသည်။
ဘီလ်ဂိတ်၏ ဇာတာအား ရှေးကျမ်းများအရ- ယောဂ ခေါ် ယုဂ် များဖြင့် လေ့လာခြင်း။
လဂ်သည် ဒွိဘာဝ ရာသီတွင် တည်လျှက်- အခြားဂြိုဟ် အများတို.သည် လည်း ဒွိဘာဝ ရာသီတွင် တည်နေကြလျှင်- နာဠ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
ဗြို.ဟဇ် ဇာတက ပရသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း အပိုဒ် ၃၅၊ ၂၀ အရ - ထိုနာဠ ယောဂ ကို ရထားသူသည်၊ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်းတို. မညီမမျှ ရှိတတ်သည်။ ငွေကြေး ရှာဖွေရန် အတွက် စိတ်ဝင်စားသည်။ လွန်စွာ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိပြီး၊ အမျိုးများကို ဂရုစိုက်တတ်ပြီး၊ နှစ်လိုဘွယ် ရာကောင်းသည်။
မှတ်ချက်- ယေဘူယျ ကျသော ယောဂ ဖြစ်ပါသည်။
သံခရ ကဒယ ယောဂ
တနင်္လာမှ အစ၊ စနေအဆုံး ဂြိုဟ် ၇-လုံး (ရာဟု၊ ကိတ်နှင့် ယူရေးနပ်စ်၊ နက်ပ်ကျွန်း၊ ပလူတို.တို.မပါ) တို. သည် ရာသီတွင် ၄-ခုတည်း တွင်သာ ရပ်တည်ခြင်း ဖြစ်သော်၊ ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
ဤယောဂကို ရသူသည်- ယုံကြည်ထိုက်သူ ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာ ၍ ဂုဏ် သိက္ခာ ရှိမည်။ အများ ကောင်းကျိုးကို လုပ်ဆောင်မည်။ စိုက်ပျိုးရေး ကို လုပ်ဆောင် တတ်သည်။ (ဗြို.ဟဇ် ဇာတက ပရသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း အပိုဒ် ၃၅၊ ၃-၆ အရ)
ဘဒြ မဟာပုရိသ ယောဂ-
ဗုဒ္ဓဟူးသည် ကိန်းအိမ်တွင် ရပ်တည်၍ ဥုစ်ရနေခြင်း၊ သို.မဟုတ် ကသစ်ရနေခြင်း ဖြစ်ပါက ဤယောဂ ကိုရသည်။
(ဘရိဂု သျှတ္တရ- အပိုဒ် ၁၃ အရ) ဤယောဂကို ရထားခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင် သည် ကာယ စွမ်းအင် ပြည့်စုံကာ၊ ကျန်းမာခြင်း၊ လက်တံ ခြေတံ ရှည်လျားခြင်း ရှိတတ်သည်။ ခြင်္သေ့ ကဲ့သို.သော ဥပဓိရုပ်ရှိတတ်၍၊ ရတနာဆင်တော် ကဲ့သို. တင့်တယ်ခြင်း မျိုးရှိတတ်သည်။ သြဇာကြီးမားသော သွင်ပြင် ရှိ၍၊ ရင်အုပ်ကျယ်ခြင်း၊ ကိုယ်လက် အင်္ဂါ အချိုးကျခြင်း၊ နဖူးပြင် လှပခြင်း၊ ဆံပင်နက်မှောင် ၍ကောက်ကွေး တတ်ခြင်း တို.ရှိတတ်သည်။ ထင်ရှားသော သြဇာသံရှိတတ်သည်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုတတ် သူဖြစ်၍ လေ့လာသင်ကြား တတ်သူ ဖြစ်သည်။ တည်ကြည်သော စိတ်၊ ရှိပြီး ဥာဏ်ကောင်းသည်။ မည်သည့် အရာကို လုပ်သည် ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါး အား မှီခိုမှု ကင်းတတ်သည်။ မျှတ၍ ခွင့်လွှတ်တတ်သူ ဖြစ်သည်။ လွန်စွာ ချမ်းသာ၍၊ စည်းစိမ်၊ ဇနီး၊ သားသမီး တို.ဖြင့် ပြည့်စုံတတ်သည်။ အသက် ၈၀ ကျမှ မြင့်မြတ်သော နေရာတွင် သေဆုံးရတတ်သည်။ (သာဝလိ ကျမ်း အရ- ဇာတာ ရှင်သည် လှပ သော ကိုယ်ခန္ဓာ ရှိမည်။ ပညာရှိ ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည် အတွက် အဘိုးတန်သော ဥာဏ်ပညာ ရှိမည်။ အနုပညာ၊ ကဗျာ ရေးဖွဲ.ခြင်း၊ တိုနှင့် သင်္ချာ ပညာတို. တွင် ထူးချွန်မည်။ သူသည် ချိုသာပြီး ပါးနပ်သော စကား ပြောနိုင်သူ ဖြစ်ပြီး၊ အသက်ရှည်လိမ့်မည်။) (ဗြို.ဟဇ် ဇာတက ကျမ်းအရ- ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် ပညာတတ်သော သူဖြစ်မည်။ ဖလဒီပက ကျမ်း အလိုအရ- ဤသူသည် ကျမ်းစာ တို.ကို တတ်မြောက်မည်။ ချိုသာစွာ ပါးပါးနပ်နပ် ပြောတတ်၍ အသက်ရှည်မည်။ သာဝတ္ထ စိဏ္တာမယ ကျမ်းအရ - အသက်တိုစေ တတ်သော အရိဌ ယောဂ တို.ပါရှိပါက- ထိုယောဂ ဆိုးတို.ကို ပယ်ဖျက်မည်။ အသိဥာဏ် မြင့်မားပြီး စာရေးလိမ့်မည်။ ဆေးကုသ ပါကလည်း တော် သော သမားတော် ဖြစ်မည်။
(မှတ်ချက်- ဘီလ်ဂိတ်၏ ဇာတာတွင် ဗုဒ္ဓဟူးသည် မိမိ၏ မူလတြိဂေါဏ ဖြစ်ရာ- ရာသီတွင် ကိန်းအိမ် (၄-တန်.) အနေဖြင့် ရပ်တည် နေသည်ကို တွေ.ရသဖြင့် ဤယောဂသည် - ဇာတာ ရှင်အား အကျိုးပေးမည့် ယောဂ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ.ရပါသည်။)
ကမ္မ ဓရုမ ယောဂ
တနင်္လာမှ ၂-တန်.နှင့် ၁၂-တန်. တို.တွင် တနင်္ဂနွေမှ လွဲ၍ အခြားမည်သည့် ဂြိုဟ်မှ ရပ်တည်ခြင်း မရှိပါက-ဤယောဂကို ရသည်။
အကြင်သူသည် ဤယောဂကို ရထားပါက- ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာ သင်ယူရေး၊ အသိဥာဏ်ပညာ၊ အိမ်ထောင်ဘက်၊ သားသမီ တို. နှင့် စိတ်ချမ်းသာ မှု တို.မှ ကင်းဝေးမည်။ ဒုက္ခခံစားရပြီး၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ကိုယ် ကာယ ကျန်းမာရေး ချို.တဲ့မှုများ၊ ဖြစ်လျှက်၊ အရှက်ကွဲ တတ်သည်။ (ဤယောဂ ပါရှိပါက ၄င်းတို.ကို ချေဖျက် ပေးသော- ကာလပ ဓရုမ ယောရ (သို.မဟုတ်) ကမ္မဓရုမ ဘင်္ဂ ယောဂ တို.ကို စစ်ဆေး ရန် လိုသည်။)
ကာလပ ဓရုမ ယောဂ
ကမ္မ ဓရုမ ယောဂ ရထားသူ အနေဖြင့် လဂ်မှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄၊၇၊ ၁၀ တန်.) တွင် အခြား ဂြိုဟ်များ ရှိပါက ဤယောဂကို ရသည်။
ဤယောဂ ကို ရထားခြင်းဖြင့်- ကမ္မ ဓရုမ ယောဂ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဆိုးကျိုး တို.ကို ပယ်ဖျက်ပေးသည်။
ကမ္မ ဓရုမ ဘင်္ဂ ယောဂ (၁)
ကမ္မ ဓရုမ ယောဂ ရထားသူ အနေဖြင့် စန်း (တနင်္လာဂြိုဟ်) မှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄၊၇၊ ၁၀ တန်.) တွင် အခြား ဂြိုဟ်များ ရှိပါက ဤယောဂကို ရသည်။
ဤယောဂ ကို ရထားခြင်းဖြင့်- ကမ္မ ဓရုမ ယောဂ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဆိုးကျိုးတို.ကို ပယ်ဖျက်ပေးသည်။
ကမ္မ ဓရုမ ဘင်္ဂ ယောဂ (၂)
ကမ္မ ဓရုမ ယောဂ ရထားသူ အနေဖြင့် စန်း (တနင်္လာဂြိုဟ်) အား အခြား ဂြိုဟ် အားလုံးက အမြင်ပြုထားပါက- ဤယောဂကို ရသည်။
တနင်္လာ သည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ အပ္ပေါကလိမ အိမ် (၃၊၆၊၉၊၁၂ တန်.တို.တွင်) ရပ်ခြင်းဖြင့် ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
ဤယောဂ ကို ရရှိခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း၊ ကြွယ်ဝခြင်း၊ လေ့လာ သင်ကြားမှုတွင် ထိရောက် အောင်မြင်ခြင်း၊ နာမည်ကြီးခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေသည်။
ကြာသပတေးသည် ကိန်းအိမ်တွင် ရပ်တည်ခြင်း မရှိသည့် အပြင် တနင်္လာမှ နေ၍ ၆-တန်.တွင် ရပ်တည်ပါက ဤယောဂကို ရသည်။
ဤယောဂကို ရသူသည် ဆင်းရဲ၍ မသင့်တော်သော အလုပ်များကို လုပ်ရတတ်ပြီး၊ အများက မုန်းတီးတတ်သည်။ ငွေကြေး မတည်ငြိမ်တတ်၊ အတွယ် အတာ ကင်းမဲ့ ပြီး အိုးအိမ် ကင်းမဲ့လျှက် သူများတကာ ပေးကမ်း စွန်.ကျဲသည် များနှင့်သာ အသက်ရှည် ရတတ်သည်။ (ဗြို.ဟဇ် ဇာတက ပရသရ ဟောရသျှတ္တရ အဆိုအရ-ဤယောဂ ရသူသည် ရောဂါ ထူပြောပြီး၊ မလှပသော လက်သည်း၊ ခြေသည်းများ ရှိကာ၊ ရူးရူးမိုက်မိုက် လုပ်တတ်သည်။ လှည်းဆွဲခြင်း၊ စသော အလုပ်မျိုးကို လုပ်ရတတ်လျှက်- ဆင်းရဲ နုံခြာပြီး ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ များ ကင်းမဲ့တတ်သည်။)
တနင်္လာမှ လွဲ၍ အခြားဂြိုဟ်တစ်လုံးလုံးသည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ၁၂ တန်. တွင် ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
ဤယောဂတွင် သောမဂြိုဟ် အနေအထား ကို ရရှိခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် စကား ပြောဆိုရာတွင် ကန်.သတ်မှု မရှိခြင်း၊ လွှမ်းမိုးနိုင်သော စွမ်းရည် ရှိခြင်း၊ သင်ကြား လေ့လာရာတွင် ထက်မြက်ခြင်း၊ အောင်မြင် ကျော်ကြားခြင်း၊ ကိုယ်ကာယ စွမ်းအင် ပြည့်စုံခြင်း၊ ကိုယ်ကာယ စွမ်းရည်ကို အစွမ်းကုန် သုံးတတ်ခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေသည်။ လမ်းလျှောက်လျှင် အောက်ကို ငေးလျှောက်တတ်သည် ဟု ဆိုထား သည်။
ဗောသျှိ ယောဂ (ဂြိုဟ်ဆိုး)
တနင်္လာမှ လွဲ၍ အခြား ပါပဂြိုဟ်တစ်လုံးလုံးသည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ၁၂ တန်. တွင် ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
ဤယောဂ ကို ရခြင်းဖြင့်- ဇာတာရှင်သည် ရက်စက် တတ်သော သဘာဝ ရှိသည်။ အကျည်းတန် သော ရုပ်ရှိ၍၊ တဏှာရာဂ ကျူးကာ၊ ဥာဏ်နည်း တတ်သည်။
ဗောသျှိ ယောဂ (မင်္ဂလ)
အင်္ဂါ သည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ၁၂ တန်. တွင် ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
ဤယောဂ ကို ရခြင်းဖြင့်- ဇာတာရှင်သည် မိခင်ကို ရန်လုပ်တတ်၍၊ အခြားသူများ အပေါ်တွင်မူ ကောင်းတတ်သည်။
ဗောသျှိ ယောဂ (ဗုဒ္ဓ)
ဗုဒ္ဓဟူး သည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ၁၂ တန်. တွင် ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
ဤယောဂ ကို ရခြင်းဖြင့်- ဇာတာရှင်သည် ဆင်းရဲ သော အသွင်ဖြင့် သာ နေရတတ်၍၊ ကျန်းမာ ရေးချို.တဲ့ကာ- အရှက်နည်း တတ်သည်။
အမလ (ကြတ္တရိ) ယောဂ
လဂ်မှ ၁၀-တန်.တွင် သဘာဝ သောမဂြိုဟ်တစ်လုံးလုံးရပ်တည် သော် ဤယောဂကို ရသည်။ (ဖလဒီပက-၆။၁၂)
ဇာတာရှင်သည် အထက်လူကြီး၊ တို.၏ ချီးမြှင့် မြှောက်စားခြင်းကို ခံရလျှက်၊ ရုပ်ဝတ္တု ပိုင်ဆိုင်မှု ချမ်းသာ၊ အလှူဒါန ပြုတတ်သော စရိုက်၊ ကူညီတတ် သော စိတ်ဓါတ်တို.ကြောင့် ထင်ရှား ကျော်ကြားလိမ့်မည်။
လဂ်သခင်သည် အလွန်အင်အားကောင်းပြီး၊ ၉-တန်.သခင်သည် သူပိုင်သော ရာသီ၊ သူ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်၊ သူ၏ ဥုစ်ရာသီ တစ်ခုခုတွင် ဖြစ်နေပြီး၊ ကိန်းအိမ်တွင် တည်နေပါက ဤယောဂကို ရသည်။
ဤယောဂကို ရခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ကြည့်ကောင်း သော ရုပ်၊ ကောင်းမွန်သော စာရိတ္တ၊ နှင့် အလွန်ချမ်းသာပြီး၊ မြေယာ အမြောက် အများပိုင်ခြင်း၊ ပညာတတ်ခြင်း၊ နှင့် မင်းကဲ့သို. တောက်ပခြင်း၊ လူအများ က သိရှိခြင်း၊ ဇနီးမယား သားသမီး တို.နှင့် ပြည့်စုံ ခြင်းကို ရသည်။
စန္ဒရ မင်္ဂလ ယောဂ
တနင်္လာ နှင့် အင်္ဂါတို.သည် ပူးယှဉ်နေကြခြင်း၊ သို.မဟုတ် တစ်ခု နှင့် တစ်ခု အပြန်အလှန် နေကြ ခြင်းတို. ရှိပါက ဤယောဂ ကိုရရှိသည်။
မိခင်ကို ကိုယ်စားပြုသော တနင်္လာနှင့် တော်လှန်ဖီဆန်တတ်သော အင်္ဂါတို.ဆက်စပ်ခြင်းဖြင့် မိခင်အား စိတ်ဆင်းရဲစေခြင်းကို ဖြစ်စေသော ဇာတာဖြစ်သည်။ သို.သော် လည်း အမျိုးသမီးကြောင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသော ယောဂ လည်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် အင်္ဂါသည် တာဝန်ဆိုးကိုယူသော ဒုဌာနအိမ်ရှင် ဖြစ်ပါက ဤယောဂ၏ အဆိုးအားကို ထင်ရှားစေ၍ တနင်္လာ နှင့် အင်္ဂါတို.သည် ကောင်းသော အိမ်ရှင်များ ဖြစ်ပါက အကောင်းအားကို ထင်ရှား စေသည်။ သို.သော်လည်း ဆိုးသော ယုဂ်ဖြစ်ပါက အလုပ်တာဝန်ကောင်းကို ယူထားသော ကြာသပတေး၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ရပါက အဆိုးဓါတ်ကို ပျက်ပြယ် စေသည်။
နိစ်မိနေသော ဂြိုဟ်၏ ဥုစ်ရာသီ အိမ်ရှင် သည် လဂ်မှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄၊၇၊၁၀တန်.) တွင် ရပ်တည် ခြင်းဖြင့် ဤယုဂ်ကို ရရှိသည်။
ထို.ကြောင့် နိစ် ဖြစ်သော သဘော ပျက်ပြယ်ကာ ရာဇယုဂ် ဖြစ်သော အဆင့်သို.ရောက်ရှိသွားသည်။
ဘီလ်ဂိတ်၏ ဇာတာတွင် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်သည် နိစ်မိနေသည်။ တနင်္ဂနွေသည် မိဿ ရာသီတွင် ဥုစ် ဖြစ်သောကြောင့် -၄င်း၏ ဥုစ်ရာသီ အိမ်ရှင်မှာ အင်္ဂါ ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါသည် ကန်ရာသီ ၁၆း၅၁ တွင် တည်နေသည်။ လဂ်သည် မေထုန် ရာသီ ၂၄း၅၈ တွင် တည်သဖြင့်- ၄င်းမှ အစပြု၍ အတန်.များကို ရေတွက်သော်- ဘာဝ တို.၏ အလယ်မှတ်ကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြသည့် အတိုင်း ရလာသည်။
၄-တန်.ဘာဝ ဗဟိုချက်မှတ် သည် ကန်ရာသီ ၂၄း၅၈ ဖြစ်သဖြင့်- ၄င်း၏ ဘယ်ညာ တစ်ဘက် စီကို ၁၅ အံသာစီ ပေါင်းနှုတ်လိုက် သော်-
၄-တန်.ဘာဝ သည် ကန်ရာသီ ၉း၅၈ မှ စ၍- တူ ရာသီ ၉း၅၈ အတွင်း တွင် ဖြစ်သည်။ ဘာဝ စက်ဆိုသည်မှာ ၄င်းတို.၏ အစ-အဆုံး အတိုင်း ရေးဆွဲထားသော စက် ဖြစ်သည်။
ယခု အခါ- အင်္ဂါသည် ကန်ရာသီ ၁၆း၅၁ တွင် ရှိခြင်းဖြင့် ၄င်းသည် လဂ်မှ- ၄-တန်.ဘာဝ အိမ်တွင် ရှိသည် ဆိုသည်ကို နားလည် လောက်ပါပြီ။
နိစ်မိနေသော ဂြိုဟ်၏ ဥုစ်ရာသီ အိမ်ရှင် သည် တနင်္လာဂြိုဟ်မှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄၊၇၊၁၀တန်.) တွင် ရပ်တည် ခြင်းဖြင့် ဤယုဂ်ကို ရရှိသည်။
ဤအချက် သည် အလွယ်တကူ မမြင်နိုင်သော အချက် ဖြစ်သည်။ ရာသီစက် အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဘာဝ စက်အားဖြင့် လည်းကောင်း အလွယ် မမြင်နိုင်သဖြင့် အောက်ပါ ရှင်းလင်းချက်ကို လေ့လာပါ။
တနင်္လာဂြိုဟ် ရပ်တည်သော နေရာမှာ- မိန်ရာသီ ၁၄း၃၃ ဖြစ်သည်။ ယခု စစ်ဆေးကြမည်မှာ- အင်္ဂါဂြိုဟ် သည် တနင်္လာမှ ကိန်းအိမ်ခေါ် သော (၁၊၄၊၇၊၁၀တန်.) အတန်. များ အတွင်း တစ်ခုခု တွင် တည်နေခြင်း ရှိမရှိ ကို စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ပထမဦးစွာ- တနင်္လာ တည်နေရာမှ- အတန်.တစ်ခု ချင်းစီ၏ ဗဟိုချက်များကို ရှာကြည့်ရန် ဖြစ်သည်။
ယခု မြင်ရသည် မှာ အလယ်မှတ် များဖြစ်နေသဖြင့် - သက်ဆိုင် အတန်. တို.၏ အစမှတ် တစ်ခုခြင်းစီကို ရှာလိုက်သော်- ညာဘက်တွင် မြင်ရသည့် အတိုင်း ရလာ ပါသည်။ မြင်ရသည့် အတိုင်း တနင်္လာ၏ ၇-တန်. သည် သိဟ်ရာသီ ၂၉း၃၃ မှ စ၍ ကန်ရာသီ ၂၉း၃၃ တွင် အဆုံးသတ်ရာ- အင်္ဂါသည် ကန်ရာသီ ၁၆း၅၁ တွင် ရှိခြင်းဖြင့် ၄င်းသည် စန်း မှ- ၇-တန်.ဘာဝ အိမ်တွင် ရှိသည် ဆိုသည်ကို မြင်လာရပါသည်။
နိစ်မိ နေသော ဂြိုဟ်သွားရောက် ရပ်တည်နေသော ရာသီ၏ အိမ်ရှင်သည် ၄င်းပိုင်အိမ်တွင် နိစ် ဖြစ်သည့် နိစ်သခင် ဂြိုဟ်နှင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်စပ်ထားခြင်းဖြင့် ဤယုဂ်ကို ရရှိသည်။
နိစ္စဘင်္ဂ ရာဇယောဂ (၄)
နိစ်မိသော ဂြိုဟ် ဥုစ် ရသော ဂြိုဟ်နှင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း အားဖြင့် ဤယောဂ ကိုရသည်။
၅-တန်. သခင်နှင့် ၉-တန်.သခင် တို. ပူးနေခြင်း၊ အပြန်အလှန် မြင်နေခြင်း ရှိကြပါက ဤယောဂ ကိုရသည်။ (ဗြို.ဟဇ် ပရသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း၊ ၄၁၊၃၃-၃၄)
ဤ ယုဂ်ပိုင်ရှင် အနေဖြင့် အောင်မြင်မှု၊ အသိအမှတ်အပြု ခံရမှု၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းသည် တစ်ဆင့်ခြင်း မြင့်တက်လာ ပြီး မင်းနှင့်တူသော အဖြစ်ကို ရသည်ဟု ရှေးကျမ်းများက ဆိုထားသည်။
နိစ်ဖြစ်နေသော ဂြိုဟ်တို.သည် ၃-၆-၈-၁၁-တန်.များတွင် တည်လျှက်၊ လဂ်သခင် မှာ ဥုစ်၊ ကသစ် ရနေပြီး လဂ်ကို ပြန်မြင်နေပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (ဗြို.ဟဇ် ပရသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း၊ ၄၁၊၁၉)
ဤ ယုဂ်ပိုင်ရှင် အနေဖြင့် အောင်မြင်မှု၊ အသိအမှတ်အပြု ခံရမှု၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းသည် တစ်ဆင့်ခြင်း မြင့်တက်လာ ပြီး မင်းနှင့်တူသော အဖြစ်ကို ရသည်ဟု ရှေးကျမ်းများက ဆိုထားသည်။ (ဗြို.ဟဇ် ဇာတက ပရာသျှရ ဟောရ သျှတ္တရကျမ်း)
တနင်္လာ သည် လွန်စွာ အရောင်တောက်ပနေပြီး ၄င်းအား မိမိအိမ်တွင်၊ဥုစ်အိမ် တွင်နေသော ဂြိုဟ်များက မြင်ထားပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (ဖလဒီပက ၇၊၇)
ဤဇာတာရှင် သည် သာမာန်မိဘ များမှ မွေးဖွားလာသည် ဖြစ်စေကာမူ- ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို. အုပ်ချုပ်ရသူ ဖြစ်မည်။
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်း၏ အဆိုအရ နိစ်မိသော ဂြိုဟ်ရပ်တည်ရာ ရာသီ၏ အိမ်ရှင် ဂြိုဟ်သည် စန်းခေါ် တနင်္လာဂြိုဟ်မှ ဖြစ်စေ၊ လဂ်မှ ဖြစ်စေ ကိန်းအိမ် ဖြစ်သော (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန်.များတွင် ကျရောက်ပါက ရာဇယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၉၊၁၃)
ဤဇာတာရှင်သည် ရှင်ဘုရင် သို.မဟုတ် ထိုကဲ့သို. အုပ်ချုပ်ရသော သူ ဖြစ်လိမ့်မည်။
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်း၏ အဆိုအရ စန်းခေါ် တနင်္လာဂြိုဟ် ရပ်တည်သော န၀င်းရာသီပိုင် အိမ်ရှင်ဂြိုဟ်သည် လဂ်မှ ဖြစ်စေ၊ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်မှ ဖြစ်စေ ကိန်းအိမ် ဖြစ်သော (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန်.များတွင် ဖြစ်စေ၊ များတွင် ဖြစ်စေ၊ တြိကုန်း အိမ်များဖြစ်သော (၁၊၅၊၉) အတန်.များတွင် ဖြစ်စေ ကျရောက်ပါက ရာဇယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၉၊၂၈)
ဤရာဇ ယောဂကို ရထားခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် သြဇာအာဏာ ကြီးမားခြင်း၊ မင်းအစိုးရကဲ့ သို. အာဏာရှိခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေသည် ဟု ဆိုထားသည်။
၉-တန်.သခင် သည် ၅-တန်.သခင် နှင့် ပူးနေပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (ဗြို.ဟဇ် ဇာတက ပရာသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ၄၃၊၁၄)
ဇာတာရှင် ထိုဂြိုဟ်တို. ပိုင်သော ဒဿာ ကာလ တို.တွင် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာခြင်းအကျိုးကို ခံစားရမည်။
လဂ်သခင်သည် ၂-တန်.၊ ၅-တန်.၊ ၉-တန်.၊ ၁၁-တန်. အိမ်ရှင်များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိပါက ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။
ဤယောဂကို ရပါက-ဇာတာရှင်သည် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ လိမ့်မည်။
၂-တန်. သခင်သည် ၅-တန်.၊ ၉-တန်. နှင့် ၁၁-တန်. အိမ်ရှင်များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိပါက ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။
၅-တန်. သခင်သည် ၉-တန်. နှင့် ၁၁-တန်. အိမ်ရှင်များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိပါက ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။
၉-တန်.သခင် သည် ဥုစ် ရာသီတွင် တည်နေလျှက် သောမဂြိုဟ်များ၏ အမြင်ကို ရပြီး၊ ၉-တန်.ဘာဝ ကိုလည်း သောမဂြိုဟ်များမှ မြင်ထားပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္တ စိန္တာမဏိ ၇၊၂၊၄၃)
ဤဇာတာရှင်သည် အလွန် သဒ္ဓါတရား ထက်သန် ပြီး၊ မချမ်းသာလျှင် တောင်မှ- အလှူဒါန နှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းတွင် တွင် လုပ်ကိုင် ရတတ်သည်။ ဤယောဂ ရှိထားပါပြီး ဘဂျ ယောဂနှင့် ရာဇ ယောဂ တို.တွဲ ပါရှိပါက- ထို ဖြစ်ရပ်ကို ပို၍ အားကောင်းစေသည်။
သာဝ ၀ိရီယ ဒါနယောဂ
၂-တန်. သခင်သည် သည် လဂ်သခင်မှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄။၇၊၁၀ အတန်.များ) သို.မဟုတ် တြိဂုဏ်းအိမ် (၁၊၅၊၉ အတန်.များ) တွင် ရပ်တည်ပါက ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။ (သာဝတ္တ စိန္တာမဏိ ၃)
ဤယောဂကို ရထားပါက-ဇာတာရှင်သည် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှု ဖြင့် ကြွယ်ဝခြင်း ဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ကမ္မဇီဝ ယောဂ (၁)
တနင်္လာ သည် လဂ်မှ ဖြစ်စေ၊ တနင်္ဂနွေ မှ ဖြစ်စေ ၁၀-တန်.တွင် တည်သော် ဤယောဂကို ရသည်။ (ဗြို.ဟဇ်ဇာတက)
ဤဇာတာရှင်၏ အလုပ် အကိုင်သည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆက်နွယ်ခြင်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတို.နှင့် ဆက်နွယ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီး များနှင့် ဆက်နွယ်ခြင်း တို.ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဇာတာရှင်သည် မိခင်နှင့် ဆက်စပ် သော လုပ်ငန်းများ မှလည်း ၀င်ငွေ ရနိုင်သည်။
ကမ္မဇီဝ ယောဂ (၂)
တနင်္လာ ဂြိုဟ်သည် တနင်္ဂနွေ မှ ဖြစ်စေ၊ လဂ်မှ ဖြစ်စေ ၁၀-တန်.မြောက် ရာသီ၏ အိမ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သော် ဤယောဂကို ရရှိပါသည်။ (ဗြို.ဟဇ်ဇာတက)
ဤယောဂသည် ကမ္မဇီဝ ယောဂ အငယ်စား မျိုးဖြစ်သည်။ တနင်္လာ (စန်း) နှင့် ဆက်စပ်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေနှင့် ရေထွက်ပစ္စည်း၊ အမျိုးသမီး တို.ကို အားကိုးရသော အလုပ်တို.ကို လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။
ကမ္မဇီဝ ယောဂ (၃)
အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် လဂ်မှ ဖြစ်စေ၊ တနင်္လာခေါ် စန်းမှ ဖြစ်စေ၊ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ဖြစ်စေ၊ ၁၀-တန်.မြောက် ရာသီ၏ အိမ်ရှင်ကို ပူးခြင်း။ မြင်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် ဤယောဂကို ရရှိသည် ဟု ဗြို.ဟဇ်ဇာတက ကျမ်းမှ ဆိုထားပါသည်။
ဤယုဂ်ကိုရပါက အင်္ဂါနှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ၊ မီး၊ မီးဖိုချောင်၊ စက်ကရိယာတို.နှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက်တို.နှင့် ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊ စွန်.စားရသော လုပ်ငန်းများ၊ ခန္ဓာကို စွမ်းအင်ကို အသုံးချရသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ရမည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဤယောဂ ကို လေ့လာရရာတွင်လည်း အင်္ဂါ၏ မူလသဘာဝ ဖြစ်သော၊ ရန် အတိုက်အခံ ဖြစ်တတ်ခြင်း၊ ရဲတင်းခြင်း တို.ကို ကောက်ချက် ချသင့်ပါသည်။
တစ်နည်း အားဖြင့် အင်္ဂါသည်- တီထွင် ထိုးဖေါက် ခြင်း၊ ရင်ဆိုင် ယှဉ်ပြိုင်ရခြင် တို.ကို ဖော်ဆောင်သော ဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်သည်။
ကမ္မဇီဝ ယောဂ (၄)
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သည် လဂ်မှ ဖြစ်စေ၊ တနင်္လာခေါ် စန်းမှ ဖြစ်စေ၊ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ဖြစ်စေ၊ ၁၀-တန်.မြောက် ရာသီ၏ အိမ်ရှင်ကို ပူးခြင်း။ မြင်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် ဤယောဂကို ရရှိသည် ဟု ဗြို.ဟဇ်ဇာတက ကျမ်းမှ ဆိုထားပါသည်။
ဤယုဂ်ကိုရပါက ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်နှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊ စက်ပြင်ခြင်း၊ လက်မှုလုပ်ငန်း၊ ပန်းချီ ရေးဆွဲခြင်း ၊ ဒီဇိုင်း လုပ်ငန်း၊ (CAD) ပန်းပုထု လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ကျောက်ဆစ်လုပ်ငန်း (3D CAD) ပိသုကာ လုပ်ငန်း၊ အမွှေးအကြိုင်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ရမည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဤယောဂကို လေ့လာရရာတွင်လည်း ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်၏ မူလသဘာဝ ဖြစ်သော အသေးစိတ် စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်း၊ လူအများနှင့် ဆက်သွယ် ပြောဆို လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ရမည်ကို မှန်ကန်စွာ ကောက်ချက်ချသင့်ပါသည်။
ကမ္မဇီဝ ယောဂ (၅)
ကြာသပတေး သည် လဂ်မှ ဖြစ်စေ၊ စန်းမှ ဖြစ်စေ၊ တနင်္ဂနွေမှ ဖြစ်စေ ၁၀-တန်.၏ အိမ်ရှင် ဖြစ်နေသော် ဤယောဂကို ရသည်။ (ဗြို.ဟဇ်ဇာတက)
ဇာတာရှင် လုပ်ကိုင်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း သို.မဟုတ် ဇာတာရှင် ၏ ဘ၀ အဆင့်အတန်း သည် အသိပညာ၊ ကို အသုံးပြုရခြင်း၊ ပညာသင်ပေးရခြင်း၊ ဥပဒေ၊ ဘာသာရေး၊ အလှူဒါန များ၊ ဘုရားဖူးလုပ်ငန်းများ၊ နှင့် ဆက်စပ် နေတတ်သည် ဟုဆိုထားသည်။
ကမ္မဇီဝ ယောဂ (၆)
၁၀-တန်.သခင်သည် သောကြာန၀င်းကို စီးနင်းနေပါက ဤယောဂကို ရရှိသည် ဟု ဗြို.ဟဇ် ဇာတက ကျမ်းမှ ဆိုထားပါသည်။ (ဗြို.ဟဇ်ဇာတက ၁၀၊၃)
ဤယုဂ်ကိုရပါက သောကြာဂြိုဟ်နှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊ ကျောက်မြက် ရတနာ လုပ်ငန်း၊ ကျွဲနွား၊ ဖျော်ဖြေမှု လုပ်ငန်း၊ အလှအပနှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ရမည်၊ ဇာတာရှင်၏ ချမ်းသာမှုသည် အိမ်ထောင်ဘက်ထံမှ လာသည် ဟု ဆိုထား ပါသည်။
ကမ္မဇီဝ ယောဂ (၇)
၁၀-တန်.သခင်သည် ရာသီနှင့် န၀င်းတို.တွင် ထိရ ရာသီများတွင် ရပ်တည်ပါက ဤယောဂကို ရသည်။
ဤယောဂကို ရထားခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် မိမိ ၏ မွေးရပ် နယ်မြေတွင်ပင် ချမ်းသာမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုတို.ကို ရမည် ဟု ဆိုထားသည်။
သာရိရ သုက္ကရ ယောဂ
လဂ်သခင်၊ ကြာသပတေး (သို.မဟုတ်) သောကြာ တို.သည် ကိန်းအိမ်တွင် တည်သော် ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၂၊၉၈)
ဤယောဂကို ရပါက- အသက်ရှည်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း နှင့် နိုင်ငံရေး လုပ်ပါက အောင်မြင်နိုင်ခြင်းတို.ကို ဖြစ်စေသည် ဟု ဆိုထားသည်။
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်းအရ လဂ်သခင်သည် ပါပဂြိုဟ်နှင့် ပူးလျှက် ရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ ၈-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည်လျှင် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ကာယ သုခ ကင်းမဲ့သော အခြေအနေကို ဖြစ်စေသည့် ဤယုဂ်ကို ရရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၂၊၁၀၉)
ဤယောဂကို ရထားခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ဘ၀တွင် သက်တောင့် သက်သာ မနေရဟု ဆိုထားသည်။
လဂ်သခင်သည် ခြောက်သွေ.သော ရာသီ၊ သို.မဟုတ် ခြောက်သွေ.သော ဂြိုဟ်ပိုင်သော ရာသီ၌ ရပ်တည်သော် ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၂)
ဤယောဂကို ရခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ပိန်ပါး ခြောက်သွေ. သော ကိုယ်ခန္ဓာ ရှိတတ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။
ပရဏ္ဏ ဗဟောဇန ယောဂ
၂-တန်.သခင် သည် နိစ် မိနေခြင်း (သို.မဟုတ်) န၀င်းတွင် အနေအထား မကောင်းခြင်း ဖြစ်ကာ နိစ်မိသော ဂြိုဟ်၏ အမြင်ကို ရထားပါက ဤယောဂ ကိုရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၃၊၁၄၁)
ဤဇာတာရှင်သည် အစားအသောက် အတွက် သူများ ပေးကမ်းစာကို စားနေရပြီး၊ မကောင်းသော အစားကို စားရလိမ့်မည် ဟု ဆိုထားသည်။
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်းအရ ၂-တန်.အား ပါပဂြိုဟ်များက ပူးထားခြင်း၊ မြင်ထားခြင်း ရှိနေပြီး၊ ၂-တန်.ဘာဝ အိမ်ရှင် သည်ရက်စက်တတ်သော ဂြိုဟ် (ကရုရ ဂရဟ) တနင်္ဂနွေ၊ အင်္ဂါနှင့် ခိဏစန်းခေါ် အားနည်းသော တနင်္လာ၊ စနေ၊ ရာဟု၊ ကိတ် တို.ပိုင်သော န၀င်းတွင် စီးနင်းပါက ဤယုဂ်ကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၃၊၁၄၃)
ထိုဇာတာရှင်အား အခြားသူတို.က အဆိပ်ခတ် နိုင်သည်။
ဘရတ္တရု ဗြိဓိ ယောဂ
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်းအရ ၃-တန်.ဘာဝ သခင် သို.မဟုတ် အင်္ဂါ သို.မဟုတ် ၃-တန်.ဘာဝကိုယ်တိုင် သည် သဘာဝသောမ ဂြိုဟ်များနှင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း တို.ရှိပြီး၊ အင်အားလည်း ကောင်းစွာရှိပါက ဤယုဂ်ကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၄၊၁၆)
ဇာတာရှင်၏ ညီ၊ ညီမ အငယ်များသည် ကြီးပွားအောင်မြင်တတ်သည်ဟုဆိုသည်။
၃-တန်.သခင်သည် ကောင်းသော န၀င်း ရာသီတွင်၊ သောမဂြိုဟ်တို.၏ အပူးအမြင်ကို ရထားကာ အင်္ဂါသည် လည်း ကောင်းသော ရာသီတွင် ရပ်တည်ပါက ဤယောဂကို ရသည်။
ဤဇာတာရှင်သည် သတ္တိကောင်းခြင်း နှင့် ပြည့်စုံ မည်ဟု ဆိုထားသည်။
ဗန္ဓု ဘိသိက္ခသ ယောဂ
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်းအရ ၄-တန်. ဘာဝ သခင် သည် သဘာဝပါပဂြိုဟ်များနှင့် ဆက်သွယ်မှုရှိ၍ အနေအထားမကောင်းသော သျှတ္တိ အံသာ (Shashti Amsha) (အံသာကို ၆၀ ပုံ ၁ပုံ ခွဲထားသော ၀ဂ္ဂစက်) သို.မဟုတ် ၄င်းအနေဖြင့် နိစ်မိသော ရာသီ သို.မဟုတ် ရန်ဂြိုဟ်ပိုသော ရာသီတစ်ခု ခုတို. တွင် တည်ပါက ဤယုဂ်ကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၄၊၆၈)
ဇာတာရှင်၏ အနီးဆုံးသော ဆွေမျိုးများသည် ဇာတာရှင်အား နားလည်မှုလွဲ၍ စွန်.ပစ်ထားကြမည်ဟု ဆိုသည်။
မတ္တရု ဒီဃာယု ယောဂ
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်းအရ ၄-တန်. ဘာဝ သခင် ရပ်တည်သော န၀င်းသခင်သည် အင်အားရှိပြီး၊ လဂ်သို.မဟုတ် စန်းမှ ကိန်းအိမ်တွင် တည်ခဲ့ပါက ဤယုဂ်ကို ရသည်။
ဇာတာရှင်၏ မိခင်သည် အသက်ရှည်မည် ဟုဆိုသည်။
တနင်္လာသည် ပါပကတ္တရိသင့် နေခြင်း (သို.မဟုတ်) ပါပဂြိုဟ်များ၏ ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်းကို ရထားပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၄၊၁၃၃)
ဇာတာရှင်၏ မိခင်သည် စောစီးစွာ သေဆုံးတတ်သည် ဟုဆိုသည်။
မတ္တရု ဂါမိ ယောဂ
တနင်္လာ (သို.မဟုတ်) သောကြာသည် ကိန်းအိမ်တွင် တည်၍ ပါပဂြိုဟ်များ၏ ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်းကို ရထားကာ၊ ၄-တန်.ဘာဝကို ပါပဂြိုဟ်များက နေရာယူထားပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၄၊၁၁၅)
ဖော်ပြရန် မသင့်သဖြင့် ချန်လှပ်ထားပါသည်။။
၄-တန်.သခင်သည် ပါပဂြိုဟ်များ၏ ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ညှပ်ခြင်းကို ခံနေရပြီး၊ ၄-တန်.တွင် ပါပဂြိုဟ်များ ရပ်တည်ပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၄၊၁၃၉)
ဤယောဂကို ရထားသော ဇာတာရှင်သည် မိမိ၏ ယုံကြည်ချက်၊ ခံစားချက် အမှန်ကို သိုသိပ် ထားတတ်သည် ဟုဆိုသည်။
၄-တန်.တွင် သောမဂြိုဟ် တစ်လုံး တည်လျှက်ရှိ ခြင်း၊ (သို.မဟုတ်) ကသစ် ရသောဂြိုဟ် (သို.မဟုတ်) မိတ်ဂြိုဟ် (သို.မဟုတ်) ဥုစ်ရသော ဂြိုဟ်တို. တည်နေခြင်း၊ (သို.မဟုတ်) ၄-တန်.အိမ်ရှင် သည် သောမဂြိုဟ် ဖြစ်ပါက ဤယောဂ ကိုရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၄၊၁၄၃)
ဇာတာရှင် သည် နှလုံးသား ဖြူစင်၍ လျှို.၀ှက် ကြံစည်မှု၊ ဟန်ဆောင် ပြောဆိုမှုများမှ ကင်းစင်တတ်သည် ဟု ဆိုထားသည်။ ဤယောဂသည် ကာပတ္တယောဂ ကို ပယ်ဖျယ်စေသော ယောဂဖြစ်သည်။
မတ္တရု သတ္တရုဝ ယောဂ
မေထုန်လဂ် ဖြစ်ပြီး၊ ဗုဒ္ဓဟူး သည် ပါပ ဂြိုဟ်တစ်လုံး၏ ပူးခြင်း ဖြစ်စေ၊ မြင်ခြင်း ဖြစ်စေကို ခံထားရပါက ဤယောဂ ကို ရသည်။
ဇာတာရှင်သည် မိခင်အား မုန်းတီးခြင်း၊ မနှစ်မြို.ခြင်း ရှိတတ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။
မတ္တရု စနဟ ယောဂ
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်းအရ လဂ်သခင် နှင့် ၄-တန်.သခင်တို.သည် ဂြိုဟ်တစ်ခုတည်း ဖြစ်နေခြင်း (သို.မဟုတ်) လဂ်သခင် နှင့် ၄-တန်.သခင်တို.သည်
မိတ်ဂြိုဟ်များ ဖြစ်နေခြင်း (သို.မဟုတ်) သောမဂြိုဟ်များက မြင်ထားခြင်းကို ခံရခြင်း တို.ရှိနေပါက ဤယုဂ်ကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၄၊၁၄၈)
ဇာတာရှင်နှင့် ၄င်၏ မိခင်တို.သည် လွန်စွာကောင်းသော ဆက်ဆံရေး ရှိမည် ဟုဆိုသည်။
လဂ်သခင်သည် ၄-တန်.၊ ၉-တန်.၊ သို.မဟုတ် ၁၁-တန်. တွင် တည်လျှင် ဤယောဂ ကိုရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၄၊၁၆၂)
ဇာတာရှင်သည် မော်တော်ယာဉ် များနှင့် အခြားသော ရုပ်ဝတ္ထုများကို ပိုင်ဆိုင် မည် ဟုဆိုထားသည်။
ပိတရုသာပ သုတသျှယ ယောဂ
နိစ်ဖြစ်နေသော တနင်္ဂနွေသည် ၅-တန်.တွင် တည်လျှင်၊ သို.မဟုတ် တနင်္ဂနွေသည် ၅-တန်.တွင် မကာရ အံသာ ဖြစ်စေ၊ ကုမ် အံသာ လဂ်တွင် တည်လျှင် (သို.မဟုတ်) ပါပ ဂြိုဟ်တို.၏ ကြားညပ်ခြင်း ခံထားရလျှင် ဤယောဂ ကိုရသည်။
ဇာတာရှင် အနေဖြင့် သားသမီး အချို. အချိန်မတန် ခင် သေဆုံးရခြင်းကို ခံစားရမည်။
သာဝလိ ကျမ်းအရ ကြာသပတေးသည် လဂ်၊ တနင်္ဂနွေ (သို.မဟုတ်) စန်းတို.ကို မြင်ထားလျှင် ဤယုဂ်ကို ရသည်။ (သာဝလိ ၃၄၊၂၅)
ဇာတာရှင်တွင် မိမိ၏ တရားဝင်သားသမီး ရရှိမည် ဟုဆိုသည်။
၅-တန်.သခင်သည် ကိန်း သို.မဟုတ် တြိကုန်း အိမ်တွင် ရပ်တည်လျှင် ဤယောဂကို ရသည်။
ဇာတာရှင်တွင် သား (သို.မဟုတ်) သမီး တစ်ယောက်သာ ထွန်းကားတတ်သည် ဟုဆိုထားသည်။
သိဗ္ဗရ ဗုဒ္ဓ ယောဂ
သောမဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်သော၊ ၅-တန်.သခင် ရပ်တည်ရာ န၀င်းရာသီ အိမ်ရှင်အား သောမဂြိုဟ်များက မြင်ထားပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၅၊၃၃)
ဇာတာရှင်တွင် မယုံနိုင်လောက် အောင် ကောင်းမွန်သော ဥာဏ်ရည် ဥာဏ်သွေး ရှိလိမ့်မည်။
ကြာသပတေးနှင့် သောကြာ တို.သည် ၅-တန်.တွင် ရှိနေလျှင် ဖြစ်စေ၊ ဗုဒ္ဓဟူးသည် ၅-တန်. တွင် ဖြစ်စေ၊ ၅-တန်.ဘာဝသည် သောမဂြိုဟ် တစ်လုံးက နေရာယူထားသော သောမဂြိုဟ်ပိုင်ရာသီတွင် ရောက်ရှိနေသည် ဖြစ်စေ၊ ဤယောဂ ကို ရသည်။
ဇာတာရှင် အနေဖြင့် သားသမီးများကြောင့် စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ရလိမ့်မည် ဟုဆိုထားသည်။
လဂ်၊ ၃-တန်. (သို.မဟုတ်) ၅-တန်. တို.တွင် အင်အားကောင်း သော သောမဂြိုဟ် တည်နေ၍ ၄င်းသည် ၉-တန်.ဘာဝ အား အမြင်ပြုနေပါက ဤယောဂကို ရသည်။
ဇာတာရှင်သည် ကံကောင်းပြီး၊ ချမ်းသာ ပြည့်စုံခြင်း ရမည်ဟု ဆိုထားသည်။
လဂ်သခင်သည် ၆-၈-၁၂ တန်.အိမ်ရှင် များ၏ ပူးခြင်း၊ အပြန်အလှန် မြင်ခြင်းကို ခံနေရပါက ဤယုဂ်ကို ရသည်။ (အထူးသဖြင့် ၂-တန်.နှင့် ၇-တန်.သခင်များပါလျှင် ပို၍ ဆိုးရွားနိုင်သည်။)
ဇာတာရှင်တွင် ဆိုးရွားသော ကျန်းမာရေးဖြစ်လိမ့်မည် ဟုဆိုသည်။
၈-တန်.သခင်သည် ၁၂ တန်.အိမ်ရှင်၏ ပူးခြင်း၊ အပြန်အလှန် မြင်ခြင်းကို ခံနေရပါက ဤယုဂ်ကို ရသည်။ (အထူးသဖြင့် ၂-တန်.နှင့် ၇-တန်.သခင်များပါလျှင် ပို၍ ဆိုးရွားနိုင်သည်။)
အရိဋ္ဌ မတ္တိဘရမဏ ယောဂ (၁)
တနင်္လာနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးတို.သည် ကိန်းအိမ် ဤယောဂ ကိုရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ)
ဇာတာရှင် အနေဖြင့် စိတ်ရောဂါ ဖြစ်ပေါ်ရန် အလားအလာ ရှိတတ်သည်။
အရိဋ္ဌ မတ္တိဘရမဏ ယောဂ (၂)
လဆုတ်စန်း သည် ကိန်းအိမ်တွင် ပါပ န၀င်း သို.ကျရောက်နေပြီး၊ ဗုဒ္ဓဟူးသည် ပါပဂြိုဟ်ဖြစ်နေပါက ဤယောဂ ကိုရသည်။
အရိဋ္ဌ မတ္တိဘရမဏ ယောဂ (၃)
တနင်္လာနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးတို.သည် ကိန်း အိမ်တွင် တည်၍၊ ပါပဂြိုဟ်များ၏ အပူးအမြင် ကိုရထားပါက ဤယောဂ ကိုရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၉၊၂၊၁၂)
ထိုဇာတာရှင်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင် ကမောက်ကမ ဖြစ်သော ရောဂါ (Mental disorder) ဖြစ်ရန် အလားအလာရှိသည်။
အရိဋ္ဌ မတ္တိဘရမဏ ယောဂ (၄)
၆-တန်.သခင်သည် ပါပဂြိုဟ်များ၏ ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်းကို ခံရ၍ ၆-တန်.ကိုလည်း ပါပဂြိုဟ်များက မြင်ထားကာ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် စန်းတို.သည် တြိဂ် အိမ် (၆၊ ၈၊ ၁၂ တန်.တွင်) များတွင် ရှိနေလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ပါပ ဂြိုဟ်များက မြင်ထားခြင်းကို ခံနေလျှင်သော် လည်းကောင်း ထိုဇာတာရှင်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင် ကမောက်ကမ ဖြစ်သော ရောဂါ (Mental disorder) ဖြစ်ရန် အလားအလာရှိသည်။
အရိဌ ဘင်္ဂ ယောဂ (၁)
အင်အားကောင်းသော ဗုဒ္ဓဟူးသည် ကြာသပတေး၊ သောကြာ တို.နှင့် အတူ ကိန်းအိမ် တစ်ခုခုတွင် တည်နေကြလျှင် ဤယောဂ ကို ရသည်။
အကယ်၍ ဤဇာတာရှင်တွင် ဘာလအရိဌ ခေါ် မွေးကင်းကာစ ကလေးငယ် သေဆုံနိုင်သည့် ယောဂ ပါဝင်ပါက- ထိုယောဂကို ပယ်ဖျက်ပေးနိုင်သော ယောဂ ဖြစ်သည်။
အရိဌ ဘင်္ဂ ယောဂ (၂)
ရာဟုသည် လဂ်မှ နေ၍ ၃-တန်.၊ ၆-တန်.၊ ၁၁-တန်.တို.တွင် တည်နေပါက ဤယုဂ်ကို ရသည်။
ဤယုဂ်ကို ရရှိခြင်းဖြင့် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဘလရိတ္ထယောဂ ကြောင့် ဖြစ်သော ငယ်ရွယ်စဉ် သေဆုံးမှုကို ပျက်ပြယ်စေသည်။
အရိဌ ဘင်္ဂ ယောဂ (၃)
တနင်္လာသည် ဗုဒ္ဓဟူး (သို.မဟုတ်) ကြာသပတေး၏ ဒရက်ကဏ ဖြစ်နေခဲ့လျှင် ဤယောဂကို ရသည်။
အာလပ္ပ အာယု ယောဂ (၁)
လဂ်သခင်နှင့် ၈-တန်.သခင် တို. (၂) ခု စလုံးသည် ထိရ ရာသီတွင် တည်နေလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ခုမှာ စရတွင် တည်၍၊ အခြားတစ်ခု မှာ ဒွိဘာဝတွင် တည်နေလျှင် သော်လည်းကောင်း ဤယောဂကို ရသည်။
ဤယောဂကို ရထားခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် အသက်တို၍၊ အသက် ၃၂-နှစ် အထိသာ နေရမည် ဟုဆိုထားသည်။
အာလပ္ပ အာယု ယောဂ (၂)
၅-တန်.နှင့် ၈-တန်. ဘာဝတို. သည် ဂြိုဟ်ဆိုးများ၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံထားရ နေခိုက် ၈-တန်.သခင် အားလည်း ဂြိုဟ်ဆိုးများ က ထိုးနှက်ထားပါက ဤယုဂ် ကို ရသည်။
ဇာတာရှင်သည် အသက်တိုပြီ်း အသက် ၃၂-နှစ် အထိသာနေရမည်ဟု ဆိုထားသည်။
အာလပ္ပ အာယု ယောဂ (၃)
၃-တန်.သခင်နှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်တို.သည် နေရောင်သင့်နေပြီး၊ ပါပဂြိုဟ်များ၏ လွှမ်မိုးကို ခံနေရလျှင် ဤယုဂ်ကိုရသည်။
မဓျ အာယု ယောဂ (၁)
လဂ်နှင့် စန်းတို.သည် ဒွိဟ ဘာဝရာသီတွင် နှစ်လုံးစလုံး တည်နေလျှင်၊ သို.မဟုတ် တစ်ခုသည် စရနှင့်၊ တစ်ခုမှာ ထိရရာသီတွင် တည်လျှင် ဤယုဂ်ကို ရသည်။
ဇာတာရှင်သည် အလယ်အလတ်တန်းစား အသက်ရှည်၍ အသက် ၇၀-ခန်.အထိ နေရနိုင်သည်။
မဓျ အာယု ယောဂ (၂)
လဂ်နှင့် ဟောရတ် လဂ် တို.သည် ဒွိဟ ဘာဝရာသီတွင် နှစ်လုံးစလုံး တည်နေလျှင်၊ သို.မဟုတ် တစ်ခုသည် စရနှင့်၊ တစ်ခုမှာ ထိရရာသီတွင် တည်လျှင် ဤယုဂ်ကို ရသည်။
ပုဏ္ဏ အာယု ယောဂ (၁)
လဂ်သခင်သည် ဥုစ်မူနေ၍၊ ၈-တန်.သခင်သည် ၈-တန်.တွင် တည်လျှင် ဤယောဂကို ရသည်။
ဇာတာရှင်သည် အထက်တန်းစား အသက်ရှည်၍ အသက် ၁၀၀-ခန်.အထိ နေရနိုင်သည်။
ပုဏ္ဏ အာယု ယောဂ (၂)
လဂ်သခင်၊ ၅-တန်.သခင်၊ နှင့် ၈-တန်.သခင် တို.သည် အင်အားကောင်း၍ ၄င်းတို.ပိုင်သော ရာသီ ဖြစ်စေ၊ န၀င်းဖြစ်စေ၊ မိတ် အိမ်တို.တွင် ဖြစ်စေ ဤယောဂကို ရသည်။
ယောဂရိဌ (ယောဂဇ အာယု) ယောဂ
လဂ်သခင်နှင့် ၈-တန်.သခင် တို.သည် ပါပဂြိုဟ်များ ဖြစ်လျှက်- ၁၂-တန်.နှင့် ၆-တန်.တွင် ကြာသပတေးမှ နေရာယူ ထားခြင်း မရှိပါက ဤယောဂ ကို ရရှိသည်။ (ဇာတာ ပရိဇာတ ကျမ်း)
ဇာတာရှင် အနေဖြင့် အသက်၁၈-နှစ် မတိုင်မီ သေဆုံးနိုင်သော အနေအထား ရှိသည်။ (ဤယောဂ ကို တွေ.ရှိပါက အခြားသော ပယ်ဖျက်နိုင်သည့် ယောဂ များဖြစ်သည့် အရိဌ ဘင်္ဂဂ ယောဂများကို ရှာကြည့်ရန် လိုပါသည်။)
တနင်္လာနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးတို.သည် ကိန်းအိမ်တွင် တည်၍၊ ပါပဂြိုဟ်တို.၏ အမြင်ကို ရထားပါက ဤယောဂကို ရရှိသည်။
ဇာတာရှင်သည် ၀က်ရူးပြန် ရောဂါ ရတတ်သည်။
သမ္ဗု ဟောရ ပရကသျှ ကျမ်း အပိုဒ် ၁၄/၆၅ အရ တနင်္ဂနွေနှင့် တနင်္လာတို.သည် နိစ်ဖြစ်နေလျှင် ဖြစ်စေ၊ သို.မဟုတ် ၄င်းတို. ၂-ခုစလုံးသည် စနေနှင့် သမသတ် ဖြစ်နေကြလျှင် ဤယောဂကို ရရှိသည်။
ဇာတာရှင် အနေဖြင့် ကျွန်မ၊ အခိုင်းအစေ ၏ သားသမီးဖြစ်တတ်သည်။
ဟိလဇ နက္တရဒေါသျှ ယောဂ
အင်္ဂါသည် ပါပရာသီတွင် တည်နေခြင်း သို.မဟုတ် ပါပဂြိုဟ်တစ်လုံး၏ အမြင်ကို ရထားသော ကိန်းအိမ်တွင် တည်ပါက-ဤယောဂကို ရသည်. (သမ္ဗူဟောရ ပရက္ကသျှ ၁၄၊၆၇)
ဇာတာရှင်သည် မျက်စိ အမြင် ချို.တဲ့လိမ့်မည်။
ဗုဒ္ဓဟူးသည် ၄-တန်.ဘာဝတွင် ကောင်းမွန်စွာ ရပ်တည်သော် ဤယောဂ ကို ရရှိသည်။ (ဘာဝတ္တ ရတ္တန ကာရ ကျမ်း ၂၊၂၊၁)
ဇာတာရှင်သည် ဗေဒင်နက္ခတ် ပညာကို နားလည် လိမ့်မည်။
ဥဘဟ ယစရိ ယောဂ
တနင်္ဂနွေမှ ၂-နှင့် ၁၂-တန်.တွင် ပါပဂြိုဟ်များသာ ရပ်တည်နေကြလျှင် ဤယောဂကို ရသည်။
ဤယောဂသည် အကောင်းအားတို.ကို လျှော.ပါးစေလျှက်- ဇာတာရှင်အား ကျန်းမာရေး ချို.တဲ့ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ကောက်ကျစ် ယုတ်မာ စေခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေသည်။
သူရိယ သုက္ကရ ယောဂ
တနင်္ဂနွေနှင့် သောကြာ တို.သည် ဘာဝ တစ်ခုတွင် အတူနေခြင်းဖြင့် ဤယောဂ ကိုရသည်။
ဇာတာရှင်သည် ဥာဏ်ကောင်းခြင်း၊ လက်နက် လုပ်ကိုင်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ စာရိတ္တ ကောင်းခြင်း၊ မိမိနှင့် မပါတ်သက်သော အမျိုးသမီး တို.မှ တစ်ဆင့် ၀င်ငွေ ရရှိခြင်း၊ အချုပ် အနှောင် ခံရတတ်ခြင်း၊ အသက်ကြီးပိုင်းတွင် အမြင် ချို.တဲ့ခြင်း၊ ဇတ်လမ်း၊ သရုပ်ဆောင်၊ အနုပညာ တို.မှ ၀င်ငွေ ရရှိခြင်းတို.ကို ဖြစ်စေသည်။
သူရိယ သျှာနီ ယောဂ
တနင်္ဂနွေနှင့် စနေ တို.သည် ဘာဝ တစ်ခုတွင် အတူနေခြင်းဖြင့် ဤယောဂ ကိုရသည်။
ဇာတာရှင် အနေဖြင့် သတ္တု ပညာတွင် ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ ဘာသာရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သားသမီး ကလေးများ နှင့် ပါတ်သက်၍ စိတ်ချမ်းသာမှု မရတတ်ခြင်း၊ အတတ်ပညာ တတ်မြောက်ခြင်း၊ ရန်သူ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံစားရတတ်ခြင်း၊ ရိုးရာ ထုံးတမ်းကို လိုက်နာ တတ်ခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေသည်။
အင်္ဂါနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးတို.သည် ရာသီတစ်ခုတည်းတွင် ပူးကပ်နေသော် ဤယောဂကို ရရှိသည်။
ဇာတာရှင် သည် ဆေးဝါးနှင့်ပါတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာဖော်ဆောင်ပြသတတ်ခြင်း၊ အလွန်မချမ်းသာ သော်လည်း၊ မုဆိုးမ သို.မဟုတ် နိမ့်ကျသော အမျိုးသမီးကို စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ သံသတ္တုထည်လုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ အနုစိတ်လုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ နပမ်းသမား၊ လက်ဝှေ.သမား ဖြစ် တတ်ခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုထားသည်။
သောကြာနှင့် စနေတို.သည် ရာသီတစ်ခုတည်းတွင် ပူးကပ်နေသော် ဤယောဂကို ရရှိသည်။
ဇာတာရှင်သည် ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက် တတ်သောသူ၊ အမြဲမပြတ် လျှောက်သွားနေတတ်သူ၊ ကျွမ်းကျင်သော လက်မှု ပညာရှင်၊ စာရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ၊ အားကစားသမား၊ ကျွဲနွားကျောင်း တတ်ခြင်း၊ အမြင် တိုတောင်းခြင်း၊ ပုံမှန် လိင်စိတ် မှ သွေဖီတတ်ခြင်း၊ ချမ်းသာ ခြင်း အတွက် အိမ်ထောင်ရေးသည် အရေးပါ သော ကိစ္စဖြစ်ခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေသည်။
တနင်္ဂနွေ၊ သောကြာနှင့် စနေ တို.သည် ရာသီတစ်ခုတည်းတွင် ပူးကပ်နေသော် ဤယောဂကို ရရှိသည်။
ဤဇာတာရှင်သည် ကောက်ကျစ်တတ်ခြင်း၊ ရိုင်းစိုင်းခြင်း၊ ရန်သူကို ကြောက်တတ်ခြင်း၊ အတတ်ပညာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ကျော်ကြားမှု တို. ကင်းမဲ့တတ်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင် မှု မရှိခြင်း၊ စာရိတ္တ မကောင်းဘက်ကို စိတ်ပါတတ်ခြင်း၊ အရေပြား ရောဂါ ခံစားရ တတ်ခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေသည်။။
Lottery Winner's Chart (In Burmese)